ED Recovery Stories4- သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားနိုင်သည်
ED Recovery ကိုဇာတ်လမ်းများ 4
ED Recovery Stories4သည်ပိုမိုတိုတောင်းသောအကောင့်များပါ ၀ င်သောစာမျက်နှာ ၈ ခုပါ ၀ င်သည့်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကြာကြာအဘို့, အသေးစိတ် ED အကောင့်ကိုမြင်ရ ပြန်ဖွင့် Accounts ကို နှင့် ပြင်ပ Rebooting ဘလော့ဂ်များနှင့် Threads
PIED တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကုသပေးခဲ့၏။ အကြှနျုပျ၏ဇာတ်လမ်းအချို့ယောက်ျားတွေကိုကူညီလိမ့်မည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ လူတွေဟာသူတို့ရဲ့နောက်ခံအချက်အလက်တွေမပေးတဲ့အခါငါ့ကိုအမှားလုပ်မိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ့မှာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၀ / မီတာ၊ အပျိုစင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းစာပေများကို ၁၂ နှစ်ကျော်အသုံးပြုခဲ့ပြီး PIED နှင့်ပြသနာများရှိသည်။ တစ်နည်းပြောရရင်ဒီမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အနာတရဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူအများထက်များတဲ့အတွက်ငါ့ဇာတ်လမ်းကလူတချို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာ PMO ကိုစွန့်လွှတ်ရန်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်၊ သို့သော်မကြာသေးမီကတစ်လကျော်အတွင်း၌ porn ကိုမကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုကိုအောင်မြင်မှုရခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာငါကြည့်ချင်တဲ့ဆန္ဒတောင်မရှိဘူး။ သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုအသုံးပြု။ နှင့် edging မဟုတ်ဘဲယခုအခါခါ Moing နေပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် MOing ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းသိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုအချို့ကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည်။ အကြောင်းတစ်ခုမှာ၊ ကျွန်ုပ်၏အမှိုက်သည်ကြာရှည်စွာတည်ရှိသည်ထက်ပိုမိုပြည့်ဝပြီးပိုမိုကျန်းမာလာသည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ယခုတွင်ငါသည် MW နှင့်အိပ်ရာထနေသည်။ တတိယအချက်က၊ ငါဟာပုံမှန်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးနောက်တစ်ဖန်ခဲယဉ်းတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လာလာပြီးကျွန်မဘေးမှာထိုင်ခုံမှာထိုင်နေလို့ပဲ။
ဒီတော့ငါဘယ်လိုနောက်ဆုံးတော့ porn ဖြတ်ခဲ့တာလဲ ၂ နှစ်ကျော်မအောင်မြင်ပြီးနောက်အကြီးအကျယ်အရေးယူရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါနောက်ဆုံးသောနည်းနည်း - ငါ့ stash အားလုံးဖျက်ပစ်ခဲ့သည်။ K2 ကိုလည်းကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ပြီးဖုန်းထဲမှာ Comvigo ကိုသုံးတယ်။
ကျွန်ုပ်အတွက်အကြီးမားဆုံးအကူအညီမှာ K9 + Comvigo ကို install လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်ယုံကြည်သောသူအားစကားဝှက်အချက်အလက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ K9 သည်အရာအားလုံးကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ပြaနာဖြစ်သည့်အပိုဆိုဒ်များအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုခဲ့သည် - youtube နှင့် google ပုံများပင်ထိုစာရင်းတွင်ရှိနေသည်။
ဒီတော့ဒါက MO ကိုစွန့်လွှတ်စရာမလိုဘူးလို့ဆိုလိုတာလား။ မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ PIED သည်လုံးဝပျောက်ကင်းအောင်မကုသနိုင်သေးပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုစွန့်လွှတ်ရန်ကျွန်ုပ်စီစဉ်နေသော်လည်း၊ သင်သည်တိုးတက်မှုလုံးဝမပြုလုပ်ပါကကလေး၏ခြေလှမ်းများသည်အထောက်အကူဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ဒါငါ့ရဲ့အခြေအနေပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့သူဟာငါဟာဒီစွဲလမ်းမှုကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစာစားဖို့၊ လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ဖို့နဲ့ငါ့ဘဝတိုးတက်ဖို့အခြားနည်းလမ်းတွေကိုလည်းကြိုးစားရှာတယ်။
ကျွန်ုပ်၏နောက်တစ်ဆင့်မှာတိုင်ပင်သူနှင့်စကားပြောရန်ဖြစ်သည်။ ငါတို့အများစုသည်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်စကားပြောရန်တွန့်ဆုတ်နေသည်ဟုထင်မြင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemနာသည်ရှက်စရာကောင်းသည်။ အမှန်တရားကတော့တိုင်ပင်မှူးတွေဟာငါတို့လိုယောက်ျားတွေကိုတချိန်လုံးစကားပြောနေတယ်။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်ကြီးထွားလာသောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ရုန်းကန်နေပါကတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်စကားပြောရန်အလေးအနက်စဉ်းစားလိုပေမည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့လူတိုင်းကိုအားသန်အောင်နေဖို့နဲ့တိုးတက်မှုမှန်သမျှကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပဲသတိရစေချင်တယ်။ သင်ပြန်လာတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရိုက်ပါနဲ့။ သင်ဟာကျဆုံးပြီးနောက်မြင်းပေါ်ပြန်လာရန်ငြင်းဆန်လျှင်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုသာအောင်မြင်အောင်လုပ်သည်။
ဆေးပညာသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဆရာဝန်များကကမ္ဘာကြီးကိုပြောတာက edb ရဲ့ဆေးကုသမှုကမူးယစ်ဆေးဝါးတွေ၊ pumps တွေ၊ ကုထုံးတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးတစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေတာကကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးအရေးကြီးတယ်။ ဒီယောက်ျားတွေက mavericks လိုပဲထွက်လာပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနဲ့ mb ကိုပြောတာပါ။
ဒါကငါ့ကိုဘာမှမကူညီနိုင်သည့်အခါငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ၃၁ ရက်သာရှိသေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထူးခြားသောအတွေးတစ်ခုအဖြစ်ခိုင်မြဲသောစိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်တစ်လခန့်ကပင်သေနေပြီ၊
မည်သူမဆို MO ကို w PIED ကုသခဲ့ပါသလား
အဆိုးရွားဆုံးသော PMO တွင်လိင်ကြင်ဖော်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုနှစ်ပေါင်းအတော်အတန်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ငါ P မပါဘဲ MO ကိုကြိုးစားခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါစိုက်ထူဖို့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။
ငါ 2020 ခုနှစ်တွင် PMO'ing မှရှောင်ကြဉ်ပြီးငါ့ကိုယ်ပုံမှန်ပုံမှန်ပြန်လာသော။ နံနက်သစ်သား၊ တစ်နေ့တာအကြိမ်ကြိမ်ကျပန်းအရိုးများ၊ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်း / အင်တာနက် / စသည်တို့နှင့်သုည - တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်သုံးကြိမ်လောက်တည်ဆောက်ပြီးနောက် MO ကိုကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်။ မကြာမီအနာဂတ်တွင်လိင်ကြင်ဖော်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်မိတ်ဖက်ပြုရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိတော့ပါ၊ သို့သော်အရာများသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်မျှော်လင့်ထားသည့်ပုံမှန်အခြေအနေသို့ပြန်သွားသည်။
ငါသည်ငါ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေကူညီပေးသည်မျှော်လင့်ပါတယ်! အားလုံးအကောင်းဆုံး, လူ!
ငါအခြားသူတစ်ဦးခံစားရသည်။ PIED သွားပြီ။
ယနေ့ငါ 100 ရက်ပေါင်းနှိပ်ပါ။
post မှ Link ကို
လူကြီးလူကောင်းတို့၊ မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်။ မကောင်းဘူးဆိုရင်အရင်ဆုံးငါကသောက်တာ၊ ပြီးတော့စီးကရက်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဘာမှမအလုပ်လုပ်ခဲ့ 90s မှတ်ဉာဏ်သိုလှောင်မှုအဖြစ်လှပသောအမျိုးသမီးများနှင့် floppy များရှိပါလိမ့်မည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဆက်ဖြတ်ပါ တော်တော်များများငါ၏အပြproblemနာထွက်စီ။
nofap / pornfree အကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့ငါ၏အကြီးတွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်ငါ၏အကိစ္စများမှအဖြေမဖွစျစခွေငျးငှါဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသမျှ, ထို့နောက်အချို့ညစ်ညမ်း2ရက်သတ္တပတ်စောင့်ဆိုင်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်, ငါ့ပြဿနာများ (ဆိုလိုသည်မှာကျွန်မ2ရက်သတ္တပတ်နေကြပြီး porn ရန်ခက်ခဲ AF လေ) ဇီဝကမ္မစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကိုယ့်ကိုကိုယ်မှသက်သေပြဖို့ masturbated ။ ထိုအခါငါကောငျးကြိုးအတှကျ up ပြုလုပ်အပ်ပေးတော်မူ၏။
Tl: ငါ ED နှင့်ဆက်စပ်သော Porn ခံစားခဲ့ရဒေါက်တာ, ကျွန်မဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ပညာရေးလည်းဆေးလိပ်ဖြတ်။
ငါမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့ငါမလွှဲမရှောင်သာအတော်အတန်လိင်သိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကနည်းနည်းလေးမှ porn ထွက်လာတယ်။ iirc, ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့စဉ်ကသူမသည်သူမနှင့်အတူစိုက်ထူခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်ကိစ္စမရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သည်။ လိင်သည်အလွန်ကောင်းသည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ငါနေ့စဉ်တစ်ပတ်ခန့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နောက်တဖန်ချိတ်နှင့်တစ်ခုစိုက်ထူရတဲ့အခက်ခဲဆုံးအရာဖြစ်၏။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ဘ ၀ အတွက်အရှက်ရဆုံးအချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကောင်းပြီ၊ Aprilပြီ ၆ ရက်ကစပြီးကျွန်တော်သန့်ရှင်းခဲ့တယ်။ မကြာသေးခင်ကမှကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီးကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ကလေးကြိမ်တကြိမ်တခါလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။
လိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောယောက်ျားများအားလုံးကိုယခု ကျေးဇူးပြု၍ porn ကိုရပ်ပါ။ PIED သည် S / O ကိုရှင်းပြရန်အဆိုးဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်
ဤနေရာတွင်မည်သူမဆို PIED ကနေပျောက်ကင်းအောင်ကုသခဲ့သလဲ
သင်လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ ၁၂၇ ရက်နှင့် nofap hardmode တွင်ရက်ပေါင်း ၅၀ (တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမရှိပါ) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါနောက်ဆုံးတော့မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုရရှိ။ ခဲယဉ်းနိုင်ပါတယ်။ ငါ့နောက်ဆုံး gf ငါ
အလွယ်တကူမခဲယဉ်းနိုင်ပါကအဆုံးသတ်ရတော့မည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည် PIED ရှိကြောင်းနောက်ပိုင်းတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
မှန်ကန်စွာစားပါ၊ လေ့ကျင့်ပါ၊ သင်ကိုယ်တိုင်မထိတွေ့ပါနှင့်သို့မဟုတ် porn ကိုမကြည့်ပါနှင့်။ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပါ။ တိုက်တွန်းပါ။ မင်းရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုပြောင်းပါ။ ငါ fap / porn မကြည့်နိုင်သည်ဟုမဆို, ငါ fap / porn မကြည့်ဟုဆိုသည်။
porn မာရျနတျ !!! သာကျွန်တော့်ဇနီး cum ဂိမ်း changer ခဲ့ငါ့ကိုလုပ်ခွင့်။
တစ်ခါတလေတစ်နေ့ကိုနှစ်ကြိမ်တစ်ခါတလေ porn တရား ၀ င်ကိုနေ့တိုင်းကြည့်လေ့ရှိတယ်။ အနည်းဆုံးအဲဒီအချိန်ကတစ်ခုအကြောင်းကို fap လုပ်တယ်။ ပျော်စရာပျော်စရာအချိန်မှာငါက cumming မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသတိထားမိလာတယ်။ အဲဒါကသူမကိုသူမဆွဲဆောင်မှုလျော့နည်းလာလို့ထင်စေခဲ့တယ် တကယ်တော့ငါကအရမ်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်နေတဲ့အတွက်သူမရဲ့အတွေးကိုသူမမုန်းတီးလိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြုံခဲ့ရပြီး ၃ ပတ်အကြာမှာငါ့ကိုလုပ်ခွင့်ပြုခဲ့သူဟာလိင်ကိစ္စပိုကောင်းလာ ပိုပြီးမကြာခဏ။ ဒီပုဒ်မခွဲအတွက်မဟုတ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်အခုရှိနေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါအသည်းအသန်သာတိုင်းယခုပြီးတော့ပြန်သွားကြသည်, ငါ့ PIED ဖယ်ရှားပစ်ရရန်ကြိုးစားနေခဲ့ချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးလအနည်းငယ်။
သို့သော်ညစ်ညမ်းဆီသို့ဦးတည်ရွံရှာခြင်းနှင့် angst ငါ့အဆင့်ကိုတရားဝင်ကြီးကအမြဲတည်ရှိ။
LOOOONG အချိန်အတွင်းပထမဆုံးအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲအချိုနှင့် MO ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ ငါ PIED ၏အပြည့်အဝပျောက်ကင်းစေခြင်းငှါမစောင့်နိုင်ပါ။ အထူးသဖြင့်မနက်ခင်းမှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်အောင်လူမှုမီဒီယာကိုငါတားဆီးခဲ့တယ်။
ငါ့ကို MO ကို-Ing အားဖြင့်ပြန်သွားကြသည်မဟုတ်ထိုသို့စံပြဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်မယ်လို့နေစဉ်, နေဆဲ porn ကိုကြည့်ခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်ပြီးတော့ MO ကို-ing တစ်ခုစွဲဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်နှင့်တူ။ ဒီ subreddit- ဖို့ကျားကန်တိုးတက်မှုကြှနျုပျတို့အားလုံးအတှကျကိုဆက်လက်စေသော ?
Edit: ဈဈ porn ကိုအသုံးမပြုခဲ့ကြောင်းပြောသည့်အခါတွင်လည်း, ကိုယ့်ကိုလည်းဆိုလိုသည်မှာငါမဆိုကွန်ပျူတာ၏အကူအညီဖြင့် MO ကိုဤအချိန် (ဖုန်း / လက်ပ်တော့ / တက်ဘလက်) မပြုလုပ်အတွက်လူမှုမီဒီယာများနှင့်အခြားအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများပါဝင်သည်
ငါသည်ငါ့ပြဿနာအသိအမှတ်ပြုစတင်အဖြစ်, ငါသည်ဤ subreddit အပေါ်သို့လဲ
ငါအပျိုဖော်ဝင်ဝင်ပြီးကတည်းက fapper ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာမရပ်မနား fapping ပြီးနောက်ငါဒီရောဂါထပ်မံမတိုင်မီရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
ငါအချို့မိန်းကလေးခဲ့ကြပေမဲ့လည်းငါတစျဦးနှင့်အတူသာလိင်တက်ကြွ, အ fapping ငါ့ကိုနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ပေးစားလေ၏။ ကျွန်မအသက်အရွယ်အဘို့အပေါ်သွားနိုင်ပေမယ့်ငါတကယ်ကခံစားခဲ့ရဘူး။ ငါအနိုင်နိုင်ဘာမှခံစားရနိုင်မယ့်ကွန်ဒုံးမပါဘဲ, porn လိင်ထက်ပိုကောင်းခဲ့ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏ရည်းစားသူမရဲ့ရည်းစား cum လုပ်မပေးနိုင်ကြောင်း, ရှက်ကြောက်ခြင်းခံစားရလိမ့်မယ်။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအများကြီးနဲ့အတူငါ လာ. ပေမယ့်တစ်ခုသာကြာမြင့်စွာအလွန်ရှည်လျားသော handjob မဟုတ်ဘဲပင်ထိုးဖောက်မှုပြီးနောက်လိမ့်မယ်။
abstinence ၏ 17 ရက်။ ဒီနေ့လိင်ဆက်ဆံတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% ပျောက်ကင်းအောင်မကုသနိုင်သေးပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်စတင်ရန်စောလွန်းသေးသည်။ ကျွန်ုပ်၏ sensitivity ကိုလုံးဝ ပြန်၍ မရနိုင်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် cum လုပ်နိုင်သည်။ လိင်သည်ကျွန်ုပ်သည် porn နှင့်ချိတ်ဆက်ထားစဉ်ကထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
၆၀ ရက် Mark
ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုကိုနောက်ဆုံးပေါ်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲခြင်းနှင့်၎င်း၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမိုများပြားစွာတွေ့နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းမှု / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမရှိဘဲရက်ပေါင်း ၉၀ (ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်) ။
PIED ဖူး / ရှိခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကတည်းကကျွန်ုပ်သည်ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနိုင်ခဲ့ပြီးသောယခင်ရာထူးကနေလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခွင့်ပြုသော်လည်း၊ ငါ၏အစိုက်ထူပြန်ကျန်းမာလာခံစားနိုင်ပါတယ်။ သူသည် Gary Wilson TedTalk ကိုသတိရနေပြီးသူသည်ပြန်လည်ကျန်းမာလာရန် 4-5 လလိုအပ်သောလူငယ်များကိုပြောပြသည်။ သင့်လျော်သောပုံရသည်။
ငါရှောင်၏ 71 ရက်အကြာမှာယနေ့မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့တကယ်ကောင်းမကောင်းအရာအားလုံးခံစားရပြီး ED သို့မဟုတ်သုက်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေရှိခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါပျောက်ကင်းအောင်ကုသတာခန့်မှန်း = ဒီ ၇၁ ရက်လုံးလုံးငါ O သို့မဟုတ် P (သို့) m မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာဘယ်သူ့ကိုမှစိတ်ဝင်စားမနေပါနဲ့၊ ငါတကယ်ကောင်းကောင်းစားပြီးအားကစားရုံကိုသွားနေတာပေါ့။
ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်းသည်သင်ကြားဖူးပြီးသားစကားများနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ခြင်းနှင့်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုပျက်ကွက်သွားသည်။ သူမကငါ့ကိုအဲဒီမှာငါ့ကိုလှုံ့ဆော်ရပ်တန့်သောအခါ, သို့သော်ငါကဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်။ ထိုအချိန်ကငါ "ကိုယ့်ကိုယ်ထဲသို့မဝင်ရဘူး" ဟုချရေးလိုက်ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာကွဲပြားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်။ ငါစိုက်ထူခြင်းပျောက်ဆုံးသော်လည်းငါသည်ဤမိန်းကလေးကိုခုနစ်လကြာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားဖြစ်လာခဲ့သည် (ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲသူမ၏အော်ဂဇင်ကိုငါပေးနိုင်သေးသောကြောင့်)
ထိုခုနစ်လကြာသည့်အခါတိုင်းတူညီသောအရာဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူခြင်းကိုအမြဲဆုံးရှုံးသွားသည်။ ငရဲဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူး၊ သူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမအားမေးမြန်းတဲ့အခါသူမကအကြောင်းပြချက်မရှိဘူး။ ကွန်ဒုံးနဲ့မသုံးဖူးဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းကိုမင်းအလုံအလောက်မသိဘူးလို့ထင်တယ် ။ ငါဒီပစ္စည်းရှာတွေ့တာခြောက်လရှိပြီလို့ငါထင်တယ်၊ ဒီဟာကအဖြေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊
အဲဒီနောက်ခြောက်လပတ်လုံးတစ်ဝက်လောက်မှာသူမ“ ဘာကြောင့်အလုပ်မလုပ်တာလဲ ??” ဟုသူမပြောသောအခါကျွန်ုပ်ဘဝ၏အဆင်မပြေဆုံးညဖြစ်ခဲ့ရပြီး“ ငါကတခြားလူတွေနဲ့အတူရှိနေတယ်၊ ​​ဒါကမဖြစ်ဘူး။ သူတို့နှင့်အတူ"။ ပြီးတော့ငါတို့လိင်ဆက်ဆံတော့မှာမဟုတ်ဘူး [=
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သောနောက်သူမကတခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုတွေ့လည်းသူနှင့်အတူချွတ်ဝင်သဖြင့်, ကျွန်မ] = ပျက်စီး, ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့ငါယခုဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်မှာရဖို့အပေါငျးတို့သကြောင်းဖြတ်သန်းသွားခဲ့ရတယ်ခဲ့သည်
သင်သိကဲ့သို့ပင်, ငါနှစ်ရက်အကြာလိင်ခဲ့ (နှင့်အတူတူပင်မိန်းကလေးနှင့်အတူယမန်နေ့နောက်တဖန်ထိုသို့ပြုကြသည်) နှင့်တစ်ဦးကယ့်ကိုပျော်စရာအတှေ့အကွုံခဲ့ !! ဒါကြောင့်ဒီအထွက် sort ဖို့ yeah, တကယ်ပျော်ရွှင်နှင့်ဘယ်တော့မှ porn ရှုပ်ထွေးငါ့ကိုတက်ခဲ့သလောက်တတျနိုငျသထင်
ဒီ post ကမင်းထင်ထားတာထက်နည်းနည်းပိုရှည်နေရင်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါဘယ်သူ့ကိုမှဒီအဖြစ်အပျက်ကိုတစ်ခါမှမပြောပြခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့် haha ​​မှာလည်းအလားတူအဖြစ်အပျက်မျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဒီနေရာကနေရနိုင်တာကောင်းပါတယ်။
မင်းရဲ့ထောက်ခံမှုအတွက်ဖိုရမ်ထဲကလူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ့ကိုနဲ့တူတဲ့ခရီးကိုသွားနေတဲ့တခြားလူတွေရှိတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးတယ်၊ ငါဒီဖိုရမ်ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးခဲ့တယ်။ သင်၏ဘဝ၏ဤအပိုင်းကိုခွဲထုတ်ရာတွင်အောင်မြင်မှုအားလုံးကိုကျွန်ုပ်အလိုရှိပါသည် (y)
Oh, ငါ ya အားလုံး 21 btw, ကောင်းသောကံဖြစ်၏ !! =]]]
Porn သွေးဆောင် ED, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အဘယ်သူမျှမ FAP နဲ့ငါ့အတှေ့အကွုံ
ငါ Porn သွေးဆောင် ED ခံစားနေရပြီးခဲ့အတိတ်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့အဘို့အကြှနျုပျ၏ porn စွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင် / သြဂုတ်လ၌ငါသည်ဤနှစ်လကာလအတွင်းဒီအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့နှင့်ဘာမျှမငါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့မှထိန်းမရသဖြင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ခက်ခဲ mode နဲ့အအေးကြက်ဆင်မယ့်ငါ့အဘို့မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ ငါ၏အရမ္မက်ကျွန်မရဲ့ပြဿနာက porn ခဲ့ masturbation မခံခဲ့ရသဘောပေါက်လာတယ်။
စက်တင်ဘာလ၏ 3rd တွင်ငါအပြီးအပိုင် porn ကိုကြည့်ရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါတစ်ကြိမ် 3-4 ရက်ပေါင်းဖြစ်ကောင်း, ငါ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို အသုံးပြု. ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲပိတ်ထားလူရှုပ်ဆက်လက်ကြောင့်ငါ၏အ Porn သွေးဆောင် ED လုံးဝငါမကျင့်သွားပြီဟုဆိုတရားမျှတမယ့် ငါကြီးမြတ်ခံစားရတော့ဘူးနှိုးဆော်ခြင်းခံရနိုင်ရန်အတွက်ဓာတ်ပုံများကိုသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများလိုအပ်ပါတယ်; ကြှနျတေျာ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်စစ်မှန်သောဘဝအမျိုးသမီးတွေကိုပြောနေတာဟာလှည့်ကွက်ပါဘူး။
အဘယ်သို့ငါသိရှိစေရန်ဖို့ကြိုးစားနေတာငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသငျသညျမဟုတျပါအဖြစ်တစ်လျှောက်အဖြစ်ဒဏ်ငွေကြောင်းကိုသတိပြုမိပါတယ် porn သွေးဆောင် ED သို့မဟုတ်သင့်စွဲရိုက်နှက်နိုင်ရန်အတွက် masturbating မပါဘဲ 40-50 ရက်ပေါင်းသို့မဟုတ်လအတွင်းသွားကြဖို့မှမလိုအပ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ ထိပ်တန်းဦးစားပေးအဖြစ်ကုသပြီးနောက်သင်ဒဏ်ငွေဖြစ်လိမ့်မယ်, တိုင်း3ရက်ပေါင်းသို့မဟုတ်ဒါကြောင့်ပြုပါငါက quashed င့် porn စွဲ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကြီးစွာသောခံစားရပါလိမ့်မယ်, porn တကယ်တော့ဘူးငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားပါဘူးငါ 'စောင့်ကြည့် မဟုတ်ဘဲအစစ်အမှန်မိန်းမနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံ / မပြောတတ် d, ငါသည်အဘယ်အရာကိုငါကျမ်းစာ၌ရေးထားတော့သငျသညျ (အထူးသဖြင့်ညဥ့်အခါ) သင့် porn စွဲနှင့်အတူဒုက္ခရှိခြင်းနေ btw လျှင်, သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှိပ်ကွပ်ဖို့လူမှုတ်သွင်းသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်ထားပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ရေအေးနှစ်ခွက်သောက်သွားပါ ဖြောင့်အိပ်ရာဖို့, ဒီငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်။ စာဖတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်😉
[နေ့ 34] အဘယ်သူ၏ဇာတ်လမ်းဒီမှာဖတ်ပြီးပါပြီအသီးအသီးကဲ့သို့ပင်ငါအစဉ်အမြဲငါအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေသို့မဟုတ်လိင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းသင်္ချိုင်းတွင်းကိုသံသယရှိသည်။ ငါအစိုင်အခဲကျောက်, အကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာရန် 45 ဒီဂရီထောင့်မှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးတက်စိုက်ထူ, အစဉ်အမြဲငါကသူတို့ကိုမှတ်မိနိုင်သည်ထက်ပိုခက်, မကြာသေးမီကနံနက်စိုက်ထူအတော်လေးမကြာခဏခိုင်မာတဲ့ခဲ့ကြပြီဟုပြောဖို့ရှိသည်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကောင်းသောသတင်းဖြစ်ပါတယ်။
၆၉ ရက်မြောက်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ… ဦး နှောက်သည်သဘာဝကျကျမိန်းကလေးများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်သည်
ဒါကြောင့်ယခုကျွန်ုပ်သည်နေ့ ၆၉ တွင်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးစက်ကိုလုပ်ခြင်းထက်များစွာမြန်ဆန်စွာကုသပေးသည်။ ငါဒီနွေ ဦး ရာသီဇန်နဝါရီလမှAprilပြီလ 69 လတယ်။
ငါထပ်မံအဆင့်အထိပြန်အနည်းဆုံး4လကြာမည်ဟုမျှော်လင့် ... ။ အခု ၂ လကျော်သွားပြီ၊ ဒီနွေ ဦး မှာ ၂ လကြာတဲ့အထိငါရောက်နေပြီလို့ခံစားရပြီးပြီ။
ဒါကြောင့်မင်းတို့မှာရှည်လျားတဲ့ရှည်လျားတဲ့ Streak တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြန်လည်ဖြစ်ပွါးခဲ့ရင် .. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသတ်ပါနဲ့။ ငါဟာငါနဲ့တူတဲ့သူဆိုရင်တော့ပထမဆုံးကုသမှုထက်ပိုမြန်လိမ့်မယ်။
ငါသဘာဝကျကျမိန်းကလေးများမှ Rewiring တာပါ
အရင်က .. ဒီနောက်ဆုံးနွေ ဦး တောင်မှ .. ငါကတကယ့်ဘဝမှာမိန်းကလေးတွေကိုကြည့်ရတာခက်တယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းကငါ့ကို BDSM နဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်ခုခုပြမယ်ဆိုရင်ငါချက်ချင်းခက်လိမ့်မယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က၊ ငါတကယ်သူတို့မိန်းကလေးတွေအနားမှာရှိနေခြင်းအားဖြင့်မိန်းကလေးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တာကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်။
ငါတို့လိုပင်ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလိုခံစားရတယ်၊ ငါတို့ psyche ထဲမှာနက်ရှိုင်းစွာနှိမ့်ချလျက်ငါတို့ကိုမိန်းကလေးများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်သေချာစေသည်။ အဲဒါဟာ PMO ကိုစွန့်ခွာပြီးသဘာဝကိုလက်ခံခွင့်ပြုတာပါပဲ။
ယခုတွင်ငါသည်အစစ်အမှန်မိန်းကလေးများကိုကြည့်ရုံမှစိုက်ထူရနိုင်။ ဤသည်ငါ့ကိုတကယ်လှုံ့ဆျောဖြစ်စဉ်ကိုအလုပ်လုပ်နေတယ်ပြသထားတယ်။ အချိန်ပိုကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးများအတွက် BDSM လမ်းကြောင်းများနှင့်ဝါယာကြိုးများကိုလုံးလုံးလျားလျားသတ်ပစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ကိုယ့်တိုးတက်မှုကိုမျှဝေချင်တယ် .. အမြဲတမ်းလိုပဲခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့် ၆၉ ရက်ဟာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူး။
လိင် - ပုံမှန်, Pre-ED မှ
ဒါကြောင့်ယနေ့ငါလိင်ခဲ့ရပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အရာကောင်းသည်ဟောင်းကာလ၌အဖြစ်ပဲ! (တစ်နာရီအတွင်း2စိုက်ထူခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်, ထိုးဖောက်မှုများအတွက်ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းအမြန်နှင့်မျှမကောင်းမကောင်းထိုးဖောက်မှုဘို့ဒုတိယတစျခုအကောင်းနဲ့ကျွန်မအဲဒီနှစ်ခုအကြားအလွန်တိုတောင်းသောချိုးကထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း) ။ yeah!
ကျွန်ုပ်သိခဲ့သောလွန်ခဲ့သော ၃ ပတ်ကလိင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသာသောတိုးတက်မှု (တစ်နာရီအတွင်းစိုက်ထုတ်ခြင်းနှင့်အော်ဂဇင် ၂ ခု၊ ပထမတစ်ခုသည်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်းအတွက်မကောင်းသော်လည်းဒုတိယတစ်ခုသည်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ရန်ကောင်းသော်လည်း၊ ဒါကြောင့်ငါနေသမျှကာလပတ်လုံးငါလိုချင်အဖြစ်ကောင်းတဲ့နှင့်ခက်ခဲနေ၏။ ကျွန်တော်ဟာဝိုင်နဲ့ Redbull နည်းနည်းပဲသုံးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီဆေးတွေကငါ့ကိုအကူအညီပေးမယ်၊
ငါကွဲပြားခြားနားဘယ်သို့ပြုပြီးသနည်း , ပွေ့ဖက်နမ်းရှုပ်ခြင်းနှင့် caressing ငါ့အဖက်မယ့်ခန္ဓာကိုယ်, ငါ့လိင်တံကိုမေ့နှငျ့သူမ၏အာရုံစိုက်အများကြီး။ ငါသည်လည်းနောက်ဆုံး2နေ့ရက်ကာလ၌သာ7orgasm ခဲ့ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတဦးတည်း2ရက်ပေါင်းလိင်ဆက်ဆံမှုမပြုမီ။
လိင်မှုကိစ္စပြီးတဲ့နောက်ငါထွက်ပေါ်လာတဲ့မြင့်မားတဲ့အရာအားလုံးကြောင့်ငါဆုတ်ခွာဖို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ငါတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ ငါထုတ်ယူရန်မျှော်လင့်ခဲ့သည်အလွန်ပြင်းထန်သောကြောင့်ငါအော်ဂဇင်2ရှိခဲ့နှင့်ကောင်းစွာငါအဘို့အပေးဆောင်။ သူငယ်ချင်းကုမ္ပဏီတခုကနည်းနည်းလေးကူညီပေးခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနေတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြင်းထန်သော ၀ မ်းနည်းမှုခံစားမှုနောက်သို့ရောက်သွားသည်။ http://en.wikipedia.org/wiki/Post-coital_tristesse ဒါပေမယ့်ဒီဝမ်းနည်းမှုအလယ်မှာတောင်ငါခံစားခဲ့ရတဲ့ ၀ မ်းနည်းမှုဟာ ၀ မ်းနည်းခြင်းထက်သာလွန်တယ်၊ ငါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာခြင်းကိုထပ်မံအတည်ပြုခြင်းမဖော်ပြခြင်းပါဘဲ ငါအိပ်မောကျသည်နှင့်နိုးသောအခါဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကုန်သွားပြီးကျွန်မပုံမှန်ခံစားရသည်။
ဒါကြောင့်ငါ့လိင်တံကအိုကေပေမယ့်ခရီးမကုန်နိုင်ဘူး။ ငါစွဲနေတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းသူတစ်ယောက်ပါ။ ငါလည်း Karezza ကိုလေ့ကျင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ နှစ်ခုကထဲကအော်ဂဇင်တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါတွက်ကြည့်မယ်။
အသုံးဝင်သောအရင်းအမြစ်တွေကိုအပြည့်အဝအံ့သြဖွယ် websites များအတွက်သင်ကဂယ်ရီနှင့် Marnia ကျေးဇူးတင်ပါသည်
NoFap အောင်မြင်ပါသည်! နောက်ဆုံးညဥ့်လိင်ခဲ့
ဒါကအားလုံးပါပဲ။ ဒါကနောက်ဆုံး 30 နေ့ရက်ကာလ၌လူအပေါင်းတို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုမိုအာရုံစိုက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့လုံးဝချွတ်ထိမှန်ကာကြောက်မက်ဘွယ်မိန်းကလေးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, အဘယ်သူမျှမတင်းမာမှုရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးညဥ့်လိင်ခဲ့ရပြီးအဲဒါကိုကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ FAP နှစ်ပေါင်းများစွာကနေတချို့ sensitivity ကိုကိစ္စများရှိခဲ့ပေမယ့်အလုပ်လက်စသတ်။
ဒါဆို ... ငါအခုအမှတ်အသားကိုဘယ်လိုပြန်စသလဲ။
[porn ဖြတ်ပြီးနောက်လတစ်ဦးကစုံတွဲ] ငါ ED ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်။ ခြုံငုံငါ့အဘို့ပိုကောင်းလာပြီဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိကြပါပြီ။ ငါသွားဖို့ Viagra လိုအပ်ခဲ့တုန်းကဒီအတိတ်တနင်္ဂနွေကိုငါမယူခဲ့ပါဘူး။ ငါ Viagra အသုံးပြုမှု၏ချောစောင်းလျှော်မှုကိုအပြည့်အ ၀ သတိထားမိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်များသည်ကောင်းမွန်သောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ငါအပြည့်အဝအနားယူနိုင်ခြင်း (ရလဒ်အနေဖြင့်) အလွန်ရင်းနှီးသောအခိုက်အတန့်ကိုအတူတကွမျှဝေခြင်းသည်၎င်းကိုအပြည့်အဝခံစားရန်နှင့်စနစ်တကျတုံ့ပြန်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ဒါကအရင်ကကျွန်တော့်ရဲ့အဓိကပြproblemနာပါ၊ အတိတ်မိန်းကလေးများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သူမနှင့်အတူရှိနေခြင်းကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည့်ခြားနားချက်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတူညီသောနည်းဖြင့်တဖြည်းဖြည်းနှင့်များများလုပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးဆိုလိုသည်မှာ အများကြီး ထိထိမိမိ၏။
ငါဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်ကလစ်နှိပ်လိုက်ပြီးကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်ရှိခဲ့သည်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကြိုတင်အားထုတ်မှုသုံးခုနှင့်အတူစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများနေသော်လည်း, ငါသမျှဤအချိန်ဘာပြnoနာမှမရှိခဲ့ဘူး။ ငါမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်ဤမျှကာလပတ်လုံးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရနိုင်ခဲ့အံ့သြသွားတယ်။ ငါ၏အစိုက်ထူသို့မဟုတ်တူသောဘာမှမဆုံးရှုံးခဲ့ပါဘူး ဒီအတွေ့အကြုံကအရမ်းကိုအံ့, စရာကောင်းပြီးကျွန်တော်မှာဘာပြproblemsနာမှမရှိဘူး။ ငါ့အတွက်, တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် porn ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းသည်ပြန်လည်နာလန်ထူရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာစောင့်ဆိုင်းယောက်ျားတွေရကျိုးနပ်သည်။ P&M ကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားရန်ခုခံနိုင်မှုနှင့်စွမ်းအားတန်ဘိုးရှိသည်။
[PIED] ရုံငါ၏အ gf နှင့်အတူလိင်ခဲ့ :)
Final yeah fuck ဆိုတဲ့
၁၁ ရက်အတွင်း - Viagra မပါဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ၃ နှစ်အတွင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။
[နေ့ 39] လူအများစုကရက်အနည်းငယ်အလွန်တရာမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တိတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်ကာလအတွင်းရောက်ရှိနေသည်။ ငါတကယ်ဖြစ်စေရှိခဲ့ဘူး။ အဲဒီအစား, ငါ့ horniness အလွန်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခဲ့သည်။
တစ်နေ့ ၂၅ ရက်ခန့်တွင် 'နံနက်သစ်သား' ကိုထပ်မံရပြန်သည်။ (တစ်ခါတစ်ရံတွင်တစ်ခါတစ်ရံအချိုများဖြင့်အိပ်ရာထရသည်) သို့သော်တစ်ခါမျှတစ်ခါကကျွန်ုပ်၌တခါမျှမရှိခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုမျှသာဖြစ်သည်ဟုထင်ရသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်ပါ။ ပြissueနာတစ်ခု - ငါ့ရဲ့စိုက်ထူတဲ့ကျန်းမာရေးရှိနေတုန်းပဲ။ သို့သော်၊ ဤအရာသည်တစ်ပတ်ခန့်လုံးလုံးရပ်တန့်သွားပြီးပြန်လည်နာလန်ထူမှုသည် linear မဟုတ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ပြန်လည်စတင်သည်။ ငါအားနည်းနေသော်လည်း, အလိုအလျောက်စိုက်ထူ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်နိုးထမှုသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပြီးအခြားသူများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည် - ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများကိုအရာဝတ္ထုများအဖြစ်ရှုမြင်တော့မည်မဟုတ်ပါ၊ သူတို့၏ကုမ္ပဏီကို ပို၍ နှစ်သက်သည်။ ၂ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ရယ်မောမိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အမင်းစိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုများကိုမကြာခဏပြုလုပ်တတ်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်းအားလုံး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုခန့်မှန်းသည်။ ကျွန်ုပ်၏ libido တွင်ဤလမ်းကြောင်းမှသိသာထင်ရှားသည့်အထွတ်အထိပ်များရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ထားသည့်ပြန်လည်ဟန်ချက်ညီစေရန်လက္ခဏာဖြစ်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင် PMO နဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုကို (ငါသည်လည်းဗီဒီယိုဂိမ်းများမှပေးသောအမြင်လှုံ့ဆော်မှုများကိုရှောင်ရန်ကြိုးစားနေသည်) နှင့်ကမ္ဘာကြီးနှင့်ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာခံစားခွင့်ရသည့် အချိန်မှစ၍ နံနက်သစ်သားပြန်လာသည်။ တိုးတက်မှုအချို့ရှိသော်လည်းအချို့သောအချက်များမှာကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ကအလွန်နည်းနေသေးသော်လည်းလိင်ဆက်ဆံစဉ်စိုက်ထူရန်အတွက်၎င်းကိုငါမှီခိုအားထားစရာမရှိဟုခံစားမိသည်။ ငါပုံမှန်အတိုင်းမွမ်းမံမှုများနှင့်အတူရက်ပေါင်း 80 သည်အထိစောင့်ဆိုင်း, ပြီးတော့ငါခံစားရတယ်ဘယ်လိုကြည့်ပါ။
ငါမပြုမီဒီကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်နှင့်ပြန် P ကို ​​/ M ကသို့သက်တမ်းလည်းကုန်ဆုံးသွားပြီ, ထိုသို့နောက်တစ်ကြိမ်မကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့အရာကိုလူတိုင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူနာဖြစ်သည်ထင်။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်တစ်လအနားယူခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်ပြန်မသွားနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်တန်ဖိုးမရှိတော့ပါ။ အရေးအကြီးဆုံးအရာကဘာလဲ။
သင်စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်။ သင့်ကိုယ်သင်မစစ်ဆေးပါနှင့်။ သင့်ရဲ့လိင်စိတ်ကခဏပျောက်သွားလိမ့်မယ် ဘယ်လောက်ကြာကြာငါမသိဘူး လူတိုင်းကမတူကြဘူး၊ အိုင်တီအလုပ်လုပ်လိမ့်မည် !! မင်း Porn ကိုဘယ်တော့မှပြန်သွားတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကတိပေးပါ။
သငျသညျ Porn အတှေးရှိနေတုန်းပဲ, သင်ပြန်လည်ဆယ်တင်ပြီးနောက်မှပင်ခဏတစ်တွေရှိတယ်လိမ့်မည်နေဆဲ, ရှိနေဆဲ Porn အတွေးများကိုရှာလျှင်စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ ရုံကသူတို့ကိုမှတဆင့်ရ။ တစ်နေ့တွင်သင်၏စိတ်သည်သူ့ဟာသူပြန်လည်ပတ်လာလိမ့်မည်။ ငါခက်ခဲတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကအမြဲတမ်းစိုးရိမ်ပူပန်နေပြီးတွေးတောဆင်ခြင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်သင်ဟာအကောင်းထက်အဆိုးကိုပိုလုပ်လိမ့်မယ်။
မင်းကဒီတနင်္ဂနွေဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်နေ့ထွက်ပြီးအမျိုးသမီးတွေနဲ့စကားပြောချင်မှာသေချာတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကနှိုးမခံရဘူးလို့သင်စိုးရိမ်တယ်။ သင်ထွက်မသွားနိုင်သကဲ့သို့ဘဝကိုဆုံးရှုံးနေသည်ဟုသင်ခံစားရသည်။ ဟုတ်တယ်၊ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ် အရာများသည်ယခုအပတ်၊ နောက်တစ်ပတ်တွင်၊ နောက်ထပ်ရက်သတ္တပတ်များစွာအလုပ်မလုပ်တော့မည့်အချက်ကိုလက်ခံပါ။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုမင်းစိတ်မပျက်စေနဲ့။ သငျသညျတိုတောင်းသောကာလ၌သေချာသန္နိstay္ဌာန်ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာခက်ခဲလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ရေရှည်စဉ်းစားပါ, ယခုမှ6ပတ်,2လစဉ်းစားပါ။ အမှုအရာတက်ကြည့်ဖို့စတင်တဲ့အခါ။ အားလုံးရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ်။ ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ကိုသာအာရုံစိုက်ပါ။
နေ့ ၇၉ - ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ထာဝရလိင်ဆက်ဆံခြင်း
မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှုမရဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိစေချင်တယ်။ ငါကွဲပြားခြားနားသောမိန်းကလေးများ5နှင့်အတူ5ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီဟာရှက်စရာကောင်းတယ်၊ ပြီးခဲ့သည့်ပျက်ကွက်ကြိုးပမ်းမှုအဆိုးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ pmo ကနေ6ပတ်ရှောင်, ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်ပြန်ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ ငါက2ပတ်လုပ်ပြီးတော့မူးရူးလိမ့်မယ်။ ဒါက ၂ လလောက်ကြာတယ်။ အဲဒီမှာတစ်နေရာရာမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါစိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်လို့ ၆ ပတ်ကြာမှ pmo ကနေအိုင်ကိုမရှောင်ခဲ့ဘူး။ Nope ။ ဒါကငါ့ကိုထွက် freaked ။ ငါ porn ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာသိပ်မများဘူး၊ ငါနောက်တဖန်မဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်အခါပါပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာငါအရာအားလုံးကိုဖြတ်; စိတ်ကူးယဉ်, တီဗီ, အမှိုက်အင်တာနက်။
79 ရက်ပေါင်းပြီးနောက်, ငါနောက်ဆုံးတော့လိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အရမ်းမိုက်တယ်။ အားလုံးမှာအဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေ။ ငါ၏အရက်စွဲနောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေအရမ်းရယ်ရတယ်ရုံနာရီအနည်းငယ်အကြာသည်အထိသွားတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမိန်းကလေးအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ငါသည်နံနက်အချိန်၌ပိုပြီးအဘို့အဆင်သင့်ခဲ့ပေမယ့်ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမကွန်ဒုံးရှိခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်သူမဆိုဒါလုပ်နိုင်တယ် ကျွန်ုပ်ရည်မှန်းချက်ထားရန်ကျွန်ုပ်၏အတိတ်အတွေ့အကြုံများတောင်မှမရှိခဲ့ပါ။ ငါမျက်စိကန်းသောဤအရာမှတဆင့်သွားခဲ့ပါသည်။ ငါကိုင်တွယ်သော bullshit သည်စကားလုံးများဖြင့်ပြောဆိုရန်ခက်ခဲသည်။ သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအ dr ခြေအနေ dr တွေကြောင့် Hop မျှော်လင့်စရာမရှိ၊ HOCD ငါ့စိတ်ကိုဒုက္ခ။ အလေးအနက်ထားပြောရရင်ကျွန်တော့်ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေအများကြီးကအကောင်းမြင်ပြီးအကောင်းမြင်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာနောက်ကွယ်မှာအမြဲတမ်းရှိနေတာသေချာတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ဖြစ်တယ် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်တာကိုရပ်လိုက်ပါ ထွက်သွားပါ မင်းခေါင်းကိုမော့ထား။ ငါပထမ ဦး ဆုံးပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလကိုရှောင်ခြင်းနှင့်အတူစမ်းသပ်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုရဖို့တစ်နှစ်နီးပါးကြာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဒီမှာပါ ထိုအခါငါလူသစ်တစ် ဦး ပေါ့။ အဲဒါအရမ်းတန်တယ်။ လူတိုင်း၊ အထူးသဖြင့် Marnia နှင့် Gary တို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားတကယ့်ဘဝ၌မည်သူ့ကိုမျှထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်နေရာမပေးနိုင်သည့်အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်နေ့ ၆၉ တွင်နှစ်ကြိမ်ချောင်းကြည့်ပြီး pmo'd လုပ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ ရက်က။ ဒါဟာအနိုင်နိုင်ပင်ငါ့ကို phased ။ ဒါကြောင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်သင်၏ 'relapses' ယူပါ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ နောက်ဆုံးပြန်လည်ပြန်ဖြစ်လာတာကငါဟာတကယ့်အရာကိုဆက်သွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုနားလည်စေတယ်။ အဘယ်သူမျှမငါ porn မှ jack ကိုသွားကြဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါပြတာကကမ္ဘာကြီးရဲ့အဆုံးမဟုတ်ပါ။
စတင်အားလုံးသင်ယောက်ျားတွေမှကံကောင်းပါစေ။ သင်ဤ shit တယ်။
ဒီမှာငါ့နောက်ဆုံး update ကိုကတည်းကယခုအချို့သောအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည် ...
သင်ဤရိုက်နှက်နိုင်ပါတယ်ယောက်ျားတွေ။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏ယခင်ပို့စ်များကိုဖတ်ရှု အကယ်. ငါသည်ဤ porn သွေးဆောင် ED တစ်အတန်ငယ်ပြင်းထန်ကိစ္စတွင်ခဲ့သည်ကိုသိပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်အလင်းကိုတွေ့မြင်နဲ့ကျွန်မပုံမှန်အသက်ကိုဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်ထင်နိုင်ဘူး။ ငါတော်တော်များများငါ့အလိုရှိသမျှအသက်တာ၏ဤပြဿနာရှိခြင်းခဲ့တာနဲ့ကျွန်မယခု 29 မိပါတယ်။ ငါအရှိဆုံးနောင်တအဆိုပါအရာကယ့်ကို, ဒီ (အထူးသဖြင့်နှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးစုံတွဲငါ့အဘို့ငရဲခဲ့) ငါ့ကိုမှတပါး soo အများကြီးနာကျင်မှုကိုရှိသည်မယ်လို့ရှေ့တော်၌, ဒီချည်ရှာဖွေတာမခံခဲ့ရပါဘူး။
ကြှနျတေျာ့နောက်ဆုံးပို့စ်တွင်ကျွန်မလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့သာပင်လေးနက်ဆွ (ပါးစပ်, လက်) နဲ့တစ်ဝက်ခက်ခဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မ (အမှန်တရား) ပျက်စီးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ကောင်းပြီ, ရက်သတ္တပတ်၏နောက်ဆုံးစုံတွဲငါမိန်းကလေးများနှင့်အတူရော့ခ်ခက်ခဲစိုက်ထူရှိခြင်းခဲ့ကြရတယ်။ ဤငါ့အသက်ကိုရဲ့အကောင်းဆုံးစိုက်ထူဖြစ်ကြအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ငါနေဆဲသင်အမြဲသငျ့စိတျ၏နောက်ကျော၌ဤကဲ့သို့သောငါသေချာဘို့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသတာမပြောနိုင်ပါဘူး။ ငါလအနည်းငယ်ကာလ၌လုံးဝသေချာပါလိမ့်မယ်။
တကယ်တော့ကျွန်မအခုပြည့်စုံဆန့်ကျင်ဘက်ပြဿနာရှိခြင်းတာပါ။ ငါအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်အချို့ကိုဒီဂရီရှိခြင်းခဲ့ကြရတယ်။ ငါ၏အညစ်ညမ်းကာလ၌အခါတိုင်းကျွန်မ (ED မူးယစ်ဆေးဝါးအချိန်အများစုကို) ကဖွင့်မရနိုင်တော့တဲ့အခါမှာကိုယ့်နာရီအဘို့အသွားနိုင်ကြောင်းနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာငါပင်မှာအားလုံးမလာနိုင်ဘူး။ အခုတော့ကျွန်မပထမဦးဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံတာနဲ့တူရဲ့။ ငါအချို့ Kegel လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်စတင် / ရပ်တန့်နည်းလမ်းကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ တူညီသောပြဿနာရှိခြင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ဘယ်သူ့ကိုမှ? သို့တိုင်ဤပြဿနာကိုပု ED တဦးတည်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကောင်းကြီးပါပဲ။
ငါပြန်လည်ထူထောင်ကလူကနေကိုနားထောငျခငျြတအဖြစ်သင် program ကိုမှကျူးလွန်လျှင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်နိုင်, ဒီနည်းကို Beats နိုင်သလား။ ငါတဦးတည်း porn / အော်ဂဇင်ကိုတက်ချော်ခဲ့နှင့် M / အိုမြား၏စုံတွဲတစ်တွဲပေမယ့်နောက်ကျောစတုရန်းတဦးတည်းမှငါ့ကိုထားခဲ့ပါဘူး။ သင်ရုံသွားစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်။ ဤသည်မှာလည်းသူကပြောတယ်အရေးကြီးသောအရှုံးမပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအခြားသူများထက်အချိန်ပိုမိုယူနိုငျသညျ။ ဒါဟာလူတိုင်းမအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, (ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်လိုမျိုး) စိတ်ပျက်စရာ၏စုံတွဲတစ်တွဲယူနိုငျသညျ။ သင်ကောငျးကြိုးအတှကျ porn UP ပေးလျှင်ဒါပေမယ့်ပြန်သင့်စိုက်ထူရလိမ့်မယ် !!
မနေ့ကငါ့အဘို့ငါ set up လုပ် 90 နေ့ကစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်၏နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ် သို့သော်လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်ပြန်ကြည့်ရှုရန်အချိန်ရပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူတစ် ဦး နှင့်တူသည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောရပါလိမ့်မည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားကစားရုံလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးပုံသဏ္ဌာန်အချို့နှင့်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ငါစကားပြောဖို့ဒါမှမဟုတ်တခြားသူတွေကိုစကားပြောဖို့မကြောက်ဘူး။
ငါလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီလား၊ ဘယ်သူသိလဲ။ ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်လျှင်ပင်မသေချာပါ။ အကြှနျုပျ၏ libido ရက်ပေါင်းတက်သည်နှင့်ချနေဆဲငါယခုပိုမိုနံနက်သစ်သားပိုစတင်ရှိသည်။ လိင်မှုကိစ္စဟာအရင်ကမခံစားရဘူးလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကလိင်ဆက်ဆံတာကိုခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်အခြားတစ်ယောက်နှင့်စူးစမ်းရန်ကစားကွင်းအသစ်တစ်ခုရှိသည်ဟုခံစားမိသည်။ Porn ကငါ့ကိုစိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလုံးဝစွန့်လွှတ်ဖို့ကျွန်မတစ်ခါမှမကြံခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ပျင်းစရာကောင်းတာကငါ့ကိုယ်ခန္တာကိုယ်လွတ်ထွက်ဖို့လိုတဲ့အခါငါကျိန်းသေသိခဲ့ပြီ။ ငါဒီမနက်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုဝန်ခံခဲ့တယ်၊ ကျွန်ုပ်သွားရသောရက်ပေါင်း ၉၀ အတွက်နောက်ထပ်ရည်မှန်းချက်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားခြင်းမှကျွန်ုပ်၏လိင်တံတွင် sensitivity ကိုပြန်လည်ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာတာသေချာပါတယ်။
အခုငါရက်ပေါင်း ၉၀ လောက်ကုန်သွားပြီ၊ ကုသမှုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာသေချာပြီ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဟာလူအချို့ကပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲသောနည်းလမ်းများမဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်သိခဲ့ရသည်။ ၎င်း၏နေရာနှင့်အချိန်ရှိသည်။ လာမယ့်ရက် ၉၀ မှာဘယ်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်။ ငါဟာအသက် ၂၉ နှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစတင် ၀ င်ရောက်နေပြီလို့ခံစားရပြီးအနာဂတ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ ဤအကြီးအသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါအနာဂတ်အတွက်အပေါ်စစ်ဆေးနေနှင့်အခြားအတွေ့အကြုံများကနေလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။
အပြည့်အဝပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကျွန်တော့်ကိုခြောက်လကြာခဲ့တယ်၊ အဲဒါကငါဟာတခါတရံတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာ (၆ လမှာ ၄ ကြိမ်) နဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့လို့ပါ။ အချိန်မရွေးကျွန်ုပ်ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်တိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့လျှင်၎င်းကိုဖြုန်းတီးပစ်ခဲ့သည်။ ငါမတ်လမှာစပြီးဒီပုံသေနည်းကိုဇွန်လမှာစတင်ခဲ့တယ်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားအားဖွင့်ပြောရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါ၏အတိုးတက်မှုကယ့်ကိုချွတ်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ ဘယ်သူ့ကိုမှကျွန်တော်တစ်ခါမှမပြောခဲ့ဖူးတဲ့အရာတစ်ခုကိုသူမနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းကငါ့ကိုတကယ်လွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။ ငါသာပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံချင်တယ်ဆိုရင်သူမကငါနဲ့အတူနေရမယ်လို့ငါပြောခဲ့တယ် သူမကသဘောတူခဲ့သည် ဒါကြောင့်ဇွန်လမှာ P&M ထဲက ၉ ပတ်ရှိနေပြီဆိုရင်အိုအပိုင်းကငါ့ကိုပြန်စောင့်နေတယ်။
ဒါနဲ့အကြံအစည်အသစ်တစ်ခုကိုသူဖန်တီးခဲ့တယ်။ သူမနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကအော်ဂဇင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါ့ကိုကုသခွင့်ပေးရင်းနဲ့သူမကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲစေတဲ့အတွက်ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့အပေးအယူတစ်ခုပဲ။ ဇူလိုင်လအကုန်ပိုင်းမှာကျွန်မရဲ့စိုက်ထူမှုတွေကကျွန်မစိတ်ထဲလိုချင်တာနဲ့ကိုက်ညီလာတယ်။ ၄ ပတ်အကြာမှာအော်ဂဇင်စကားမပြောနိုင်ဘူး။ ငါထို့နောက်သူနှင့်အတူ 4x / wk "orgasming", ထို့နောက် 1x / wk, ထို့နောက် 2x / wk စတင်ခဲ့သည်။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုသြဂုတ်လတလျှောက်လုံးအထိခေါ်သွားခဲ့တယ်။ စက်တင်ဘာလအစမှာငါလိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းသူမနဲ့လိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါယခုမှာသူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံနိုင်သည်။
ကိုယ့်ငါ့လိင်တံအပေါ်ယုံကြည်မှုရှိသည်နှင့်စိုက်ထူလာလိမ့်မည်ဟုငါသိ၏။ ဒါကအံ့သြစရာကောင်းလိုက်တာ။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်တစ်ပတ်အကြာတွင်အလုပ်မလုပ်နိုင်သည့်နောက်ပြောင်မှုများစွာရှိခဲ့ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်မှာ၎င်းသည်သက်မဲ့ဖြစ်သည်။ ဒါကငါ့ကိုစိတ်ဓာတ်မကျဘဲလှုံ့ဆော်ပေးရုံပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိပါစေ၊ ဒါက ၁၀၀% ပြင်ဆင်လို့ရတယ်။ အဲ့ဒါကကျွန်တော့်ကိုဆက်ထိန်းထားခဲ့တယ်။
ကျွန်မသတိထားမိခဲ့ကြ positive ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု:
ဒီထက်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါ, အကူအညီမဲ့။
porn ကိုစွန့်လွှတ်ရကျိုးနပ်သည်။ ဒါကငါ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။ ငါသည်ဤခံစားချက်ကောင်းလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့သည်သင်တို့ရှိသမျှကိုပြောပြတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီအကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှ! ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်သည်ယခုမှ စ၍ တစ်နှစ်မည်မျှခံနိုင်ရည်ရှိသည်ကိုသာစိတ်ကူးနိုင်သည်။ အနာဂတ်ဟာငါ့အတွက်အရမ်းတောက်ပနေတဲ့အတွက်ငါထပ်ပြီးတင်မယ်။ မတ်လမှာငါရေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုငါဖတ်နေတုန်းတခြားသူတွေရေးတဲ့စာကိုဖတ်နေသလိုခံစားရတယ်။ ငါစိတ်ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာငါသိပြီးပြီ၊ အဲဒီမှာရှိလူတွေအားလုံးကိုငါသက်သေပြနေသည်။
မင်းကို PMO မရှိသလောက် ၈ ပတ်သာလိုသည်။ မင်းရဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိကိုပြန်လည်ရရှိရန် ၂ လကြာ PMO မရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ချိုမြိန်သောအပေးအယူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၃ နှစ်သာရှိသေးပြီးကျွန်ုပ်၌ပြproblemနာရှိကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်လုံလောက်ခဲ့သည်။ သင်၏ငယ်ရွယ်သောလိင်ဆိုင်ရာကြွယ်ဝမှုကိုကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်မဖြုန်းတီးပါနှင့်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လကဒီဘလော့ဂ်ကကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ ကံကောင်းပါစေ! ငါအများကြီးပိုပြီးအောင်မြင်မှုပုံပြင်များကိုကြားဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
The Dark Knight ဟာ (ယခုတွင်ငါသည်ငါ၏အလိင်တံကိုပဌနာကဲ့သို့) Rises: 90 ရက်ပေါင်းပြည့်စုံ။ AMA
ငါဒီမှာလုပ်မယ်ငါတကယ်စဉ်းစားဘူး။ ကောင်းပြီ၊ ငါထင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်၊ ဤ ထိုသို့ပြုမှရှည်လျား။
ငါနှင့်အတူရှိခဲ့သည် / r / nofap သင်ကသင့်ရဲ့အမှိုက်ကိုမဖမ်းယူပဲတစ်ပတ်သွားနိုင်မလားဆိုတာသိဖို့စိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ငါသော်လည်းစိန်ခေါ်မှုအတွက်ရိုးရှင်းစွာ join ခဲ့ပါဘူး။ ငါ ED နှင့်အတူအချိန်ကြာမြင့်စွာရုန်းကန်; လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မြောက်မြားစွာကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာငါမြင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကိုငါငိုနေတာကိုကြည့်နေတုန်းသူတို့ဟာတစ်ခုခုမှားနေတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ် ဦး နှောက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ချိတ်ဆက်မိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်းမရပ်နိုင်ပါ။ ထိုအခါစိန်ခေါ်မှုတလျှောက်သို့ရောက်ကြ၏။
ငါဒီနေရာကို suckerfish တစ်ကောင်လိုကပ်မိလိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကတံဆိပ်တွေမကပ်ခင်လူတွေရဲ့ရလဒ်တွေကိုစာရင်းပြုစုဖို့စာရင်းဇယားတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ မင်းကမင်းရဲ့မြည်းကိုငါပေါ်ခုန်လိုက်ပြီးပြေးလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမယှဉ်ပြိုင်ဘူး။ ငါထိန်းချုပ်မှုထဲကပြန်မြင့်တက်, တက်အရှိန်မြှင့်ထားရှိမည်။ “ ကောင်းပြီနောက်လာမယ့်အပတ်မှာငါစမယ်” အဲဒါမုသားပဲ။ ငါကတစ်ချိန်ကတစ်ကြိမ်တိုင်း2ပတ်အထိလုပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှမ။
ဒါဆိုဘာတွေပြောင်းလဲသွားတာလဲ။ ကောင်းပြီ, ငါကြာကြာငါရှောင်ကြဉ်ရလဒ်များကိုမြင်တော်မူ၏။ ငါမှာအစကတည်းကရည်းစားရှိခဲ့တယ်။ ငါ PMO မပါဘဲ ၂ ပတ်ကြာအောင်သွားခဲ့ရင်ဘုရားသခင်ကသူမပတ် ၀ န်းကျင်မှာအပူဆုံးပဲ။ သူမကိုကြည့်ရုံဖြင့်သွေးသည်အောက်သို့ဆင်းသွားသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်အတော်လေးမှန်ကန်တဲ့မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါနေဆဲငါ့အ PMO နည်းလမ်းတွေသို့ကျလိမ့်မယ်။
နွေ ဦး ရာသီစာမေးပွဲများလှည့်ပတ်သွားပြီးနောက်ဆုံးတွင်တစ်ခုခုနှိပ်လိုက်သည်။ ငါ fap ဖို့အချိန်မပေးခဲ့ပါဘူး, အကြှနျုပျ၏ပညာသင်ဆုလိုင်းပေါ်ခဲ့သည်။ ဒါနဲ့ ၃ ပတ်အတွင်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဆက်သွားနိုင်မယ်၊ ထို့နောက်ငါနှင့်ရည်းစားကွဲသွားသည် shit ။
ငါထိန်းချုပ်မှုထဲကပြန်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်နိုင်ပေမယ့်တစ်ချိန်ကငါကဘာမှမပြောင်းလဲလိမ့်မယ်သိသည်။ ဒါနဲ့ငါကမှာထားရှိမည်။ ငါလိမ်မည်မဟုတ်၊ အလွန်မှောင်မိုက်သောအချိန်များကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီးထိုတိုတောင်းသောပျော်ရွှင်ဖွယ်ကာလအတွက် fapping ကိုအလေးအနက်စဉ်းစားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်မကျင့်။
ယခုမှရှေ့ဆက်အစာရှောင်။ ကျွန်ုပ်မှာမခံစားရသည့်ရက်များစွာရှိနေသေးသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုသည်မည်သို့သောအရာဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်လာသည်။ ငါကလူတွေကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးနားလည်တယ်လို့ပြောဖို့တောင်တောင်မယုံနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိကျွမ်းလာတယ်လို့ခံစားရတယ် ထိုတော်တော်လေးကောင်းသောခံစားရသည်။
ငါ့မှာညစ်ညမ်းတဲ့ပြproblemsနာရှိနေသေးတယ်။ ငါစို့ဒါကတစ်ရက်, 83. မှာအခြားနေ့ကကြည့်ရှုကြ၏။ ငါ ... ငါမသိဘူးရက်ပေါင်းဘယ်မှာငါရှိခဲ့ပါတယ်ကလွဲချော်? ဒါကရုန်းကန်နေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်းကျတော့၊ ငါ့ဘ ၀ ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုထိန်းချုပ်ထားလို့ရတာပဲ။
ငါဒီနေ့ငါပွတ်သပ်နေလိမ့်မယ်လို့ငါထင်ခဲ့ပေမဲ့အဓိကအချက်ကဘာလဲ။ ရပ်ရွာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် / r / NoFap။ သင်၌မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်၏လမ်းကိုရိုက်ပါ။ ငါချက်ချင်းအဖြေပေးမယ်လို့ကတိပေးလို့မရဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကလူတိုင်းကိုသေချာပြန်ဖြေပေးမယ်။
ပြီးခဲ့သည့်ညကလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ED နှင့် DE မပါ
(နေ့ 62) ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် / တညဉ့်ရပ်တည်ချက်အဘို့အမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူရှိခဲ့အခါတိုင်းငါဖြစ်စေအော်ဂဇင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်စိုက်ထူရနိုင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းမကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ညက (နှင့်ယနေ့နံနက် .. ဟဟ) ထိုအရာများထဲမှမည်သူမျှပြanနာမရှိပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါမနေ့ညကသောက်ခဲ့ပြီးမနက်ဆိုသမ္မာသတိရှိခဲ့တယ်။ Nofap အလုပ်လုပ်သည်။ 🙂
အခြားနေ့ကဒီ subreddit ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တကယ်တော့မဟုတ်ရင်တစ် ဦး redditor ခဲ့ဘယ်တော့မှမ။ ဒီတော့ဒီမှာငါ့ဇာတ်လမ်းပါ။
ငါအပြင်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့“ လက်မထပ်မီလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲ” နေထိုင်တဲ့ကလေးတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက PMO ကိုစွဲလမ်းခဲ့တယ်။ ညအချိန်တွင်မာရသွန်အနေဖြင့်အင်တာနက်ဘရောက်ဇာသမိုင်းကိုမည်သို့မည်ပုံကစားရမည်ကိုရှာဖွေသည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်သည်တရားမ ၀ င်သောအရာတစ်စုံတစ်ရာကိုပြုလုပ်နေပုံမပေါ်ပါ။ ခင်ဗျားသိပါတယ်၊ ဒီလိုရှည်လျားတဲ့ရှည်လျားတဲ့အနားသတ်မျဉ်းကမင်းရဲ့ဝမ်က“ ဦး လေး” လို့ပြောနေသလိုပဲအမြင့်ဆုံးကိုရောက်အောင်နာကျင်စေတဲ့အထွpain်အထိပ်
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပထမနှစ်ကျောင်းသူလေးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ထွက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊ သူသည်ပြproblemနာနှင့် ပတ်သက်၍ စောစောစီးစီးပြောခဲ့ပြီးသော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နောက်ကွယ်ရှိကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ကောင်းပြီ၊ ကောလိပ်တက်ပြီးတာနဲ့ ၂ လ၊ ၃ လလောက်ကြာတယ်။ ဒါကငါ့ဘဝထဲကိုပြန်ဝင်သွားပြီးသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါလိမ်ပြောခဲ့တယ်။ ငါသုံးနေတယ်ဆိုတာကိုသူမကအထူးမေးမြန်းခဲ့တယ်၊ ငါငြင်းခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ကျွန်မကျောင်းမဆိုပညာရေးဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်၏အစားပေါ်တတ်၏အနည်းငယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ခဲ့သောဖမ်းမိတယ်။ ငါသည် Asshole ကျွန်မရဲ့ရည်းစားမှအဆိုပြုထား ရှေ့မှာ ငါသည်ဤအကြောင်းကိုသူမ၏သို့ပြောသည်။ သူမသည်ပျက်စီးပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာငါ့ကိုတို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူသဖြင့်, မင်္ဂလာဆောင်မည့်အစီအစဉ်အပေါ်ခဲ့ကြသည်ခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ငါမင်္ဂလာဆောင်မတိုင်မီစတင်သုံးစွဲ, သောထင်ရှားသောပြissueနာကို ဦး ဆောင်သော: ED ။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စလုံးအပျိုစင်တွေဖြစ်ကြပြီးကျွန်မတို့ရဲ့ပျားရည်ဆမ်းခရီးသုံးရက်မြောက်နေ့အထိတောင်မှမထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါဟာရှက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအရမ်းစိတ်ဖိစီးနေတယ်၊ ​​ငါ peed ကြည့်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းထွက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ ငါနည်းနည်းလောက်ထုတ်ပစ်လိုက်ပြီးစက္ကန့် ၂၀ လောက်အကြာမှာငါပြန်သွားရတော့မယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်မရဲ့ပျားရည်ဆမ်းခရီးကိုနာရီပေါင်းများစွာအိမ်သာထဲမှာထိုင်ပြီးနောက်လှည့်စားမှုကိုစောင့်နေခဲ့တယ်။
ငါလိင်အသစ်ဖြစ်ကတည်းကငါမှာ UTI ရှိမယ်ထင်တယ် စမ်းသပ်မှုအချို့ပြုလုပ်ရန် ER သို့သွားခဲ့သည်။ ဘာမှမ ဒေါက်တာကစိတ်ဖိစီးမှုပဲ
PMO ကတကယ့်ပြproblemနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော့်ခေါင်းနောက်ဘက်ကသိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ED ကဘယ်လောက်လေးနက်တယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ ငါကြားသိသောနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်မသာဖြစ်ခဲ့သည် မည်သူမဆို အခြားပြtheနာတစုံတရာရှိသည့်အခြားသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာပြuredနာအချို့ရှိသည်ဟုယူဆခဲ့သည် - ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်အလွန်အကျွံဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှည်လွန်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာရောဂါလက္ခဏာများသည်ဆီးသွားပစ္စည်းများနှင့်တိုက်ဆိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးတိုက်ခန်းသို့ပြောင်းရွှေ့။ ငါအင်တာနက်မရှိလို့နောက်တစ်ခါပြန်ဖမ်းမိမယ်ဆိုရင်ငါကျောင်းထုတ်ခံရနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်အကောင်းဆုံးလိင်ဆက်ဆံနိုင်သည်။ ပြီးတော့သူမရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်တာကသူမကတစ်နေ့လုံးတစ်နေ့လုံးချိုသာတဲ့ပုတီးစိပ်ဖြစ်သင့်တယ်လို့သူမထင်တဲ့အတွက်သူမဟာစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ ၎င်းသည်မကျေနပ်မှုများဖြစ်လာသည့်တိုင်ကြားမှုများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးမကျေနပ်မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအတွက်အိမ်နီးချင်း၏ဝိုင်ဖိုင်ကိုငှားသည်။ ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းငါပြန်လာပြီ ကန့်သတ်ချက်ကန့်သတ်ထားခြင်းကသူမကိုဖုံးကွယ်ရန်ခဲယဉ်းသည်၊ တချိန်တည်းမှာပင်ကျောင်းချိန်တစ်ခုတည်းတွင်ပင်နေထိုင်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ ကင်ဆာရောဂါပြန်ရောက်ပြီ
ပြီးတော့ငါတို့ဘွဲ့ရပြီးပြောင်းရွှေ့တယ်။ ဒါဟာသိသာတဲ့ပိုဆိုးလာနှင့်သူမနောက်ဆုံးမှာငါ့ကိုရှာတွေ့။ ဒါဟာသူမအပေါ်ဒေါသထွက်; ကျွန်တော်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် flash drive ကိုသုံးပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဓါတ်ပုံတွေပါရှိသည် သူမ၏ laptop မှ mp4s ကိုကျွန်ုပ်၏အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားသည့်မြေအောက်ခန်းရှိ desktop ပေါ်သို့ယူရန်၊ ကျွန်ုပ်သည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးကျွန်ုပ်သွေးဆောင်မှုခံရမည်မဟုတ်ပါ (wink, wink) ။ ပြီးတော့ဒီသင်တန်းတွေကိုငါသုံးနေသလားဆိုတာကိုသူမငါ့ကိုမေးခဲ့တယ်၊ ငြင်းပယ်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့သူမတွေ့တော့အရာအားလုံးဟာရှုပ်ထွေးသွားတယ်။
ငါပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်အလုပ်မှထွက်လိုက်ပြီးသူနှင့်အတူသူမ၏ဇာတိမြို့သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးမိသားစုနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာနေထိုင်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါအတူတူပန်းတိုင်များစာရင်းကိုရေးဆွဲဒါငါငါ့နောက်ကွယ်မှနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသောအားနည်းချက်တိုင်းကိုဖြတ်ပြီးအဖြေတစ်ခုနှင့်အတူ၎င်းကိုစက္ကူပေါ်တွင်တင်လိုက်သည်။ ငါတို့ရွေ့လျားတဲ့အခါငါရှောင်ကြဉ်ပါ၊ သူမကနားမလည်ဘူး သူမသည်နောက်တဖန်စိတ်ပျက်ရရှိသွားတဲ့။ အခုသူခွဲနေချင်တယ်။
ပြီးတော့ငါတို့လုပ်ပေးတယ်။ သူမသည်အခြားယောက်ျားများနှင့်အတူအိပ်ပျော်သည်။ ပုံမှန်လိင်သည်မည်မျှဖြစ်သည်။ ငါနောက်တစ်ခါသုံးပါ ငါဒုတိယဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာ ၀ န်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်သွားတဲ့ကင်မရာကကျွန်တော့် Urethra ကိုကင်မရာတစ်လုံးဖြုတ်လိုက်ပြီးအရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်လို့ပြောတယ်။ ငါတွေ့ဖူးသမျှထဲမှာအဆိုးဆုံးနာကျင်မှုကတော့ pee အရာဝတ္ထုအနည်းငယ်ကိုစမ်းကြည့်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဆီးအိမ်သည်အစဉ်အမြဲအချည်းနှီးမဖြစ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏စီးဆင်းမှုသည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာမြင့်တက်နေသကဲ့သို့ (အချို့သူတို့သည်ဆီးအိမ်များ၌သင်၏ piss ၏အလျင်ကိုတိုင်းတာသောအာရုံခံကိရိယာများရှိသည်) ကဲ့သို့သောအရာများသည်ပိတ်ဆို့နေ၏။
ကျွန်မအသစ်တစ်ခုမိန်းကလေးနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှစဉ်းစားရန် start ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာကိုငါ့အဇနီးဟောင်းကြောင့်ထိုကဲ့သို့သော nag ခဲ့ပါတယ် ထို နှိုးဆွဖို့အစစ်အမှန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤမိန်းကလေးသည်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြissuesနာများနှင့်ပတ်သက်လျှင် ပိုမို၍ အတွေ့အကြုံရှိပြီးနားလည်မှုရှိသည်။ Nope ။ သို့တိုင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါသူနှင့်အခြားဆက်ဆံရေးပြrelationshipနာများကြောင့် (ညစ်ညမ်းမှု - ကြာရှည်မခံသောကြောင့်) porn ကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်။ ထိုအရာပြီးဆုံးသောအခါငါရွေ့လျားသွားပြီးတစ် ဦး တည်းနေခြင်းသည်အဆုံးမဲ့အငြင်းပွားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ငါမနေ့က NoFap ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်စိန်ခေါ်မှုစတင်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့အထိမှတ်ပုံတင်မထားခဲ့ပါဘူး ငါမှာဘယ်တော့မှထပ်ခါထပ်ခါမကြုံဖူးတဲ့အချိန်တွေ၊ ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။ ဒီအရာကိုအောင်မြင်နိုင်ပြီဆိုတာယုံဖို့ခက်တယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ဤကဲ့သို့သောထောက်ခံမှုအုပ်စုတစ်စုကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒီတော့ဒီမှာမျှော်လင့်ပါတယ်။
Relapse / အနာဂတ် Porn အသုံးပြုခြင်း
အသက် ၁၆-၂၆ တွင်မကြာခဏနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောညစ်ညမ်းသောအလေ့အထများပါဝင်သည်။ ငါဘယ်တော့မှညစ်ညမ်းသောအမျိုးအစားများကိုဘယ်တော့မှမမြှင့်ခဲ့ဘူး။ ငါကြိုက်နှစ်သက်သောရိုးရှင်းသောဗီဒီယိုများကိုအမြဲတမ်းစွဲစွဲမြဲမြဲရှိခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤအမျိုးအစားတစ်ခု၏ TON ကိုကြည့်ရှုခြင်း၏ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်များစွာထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုဖွင့်လှစ်သည်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းကမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ED ပြissuesနာအချို့ကြုံတွေ့ခဲ့သည်။
YBOP တွင်ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှဖတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ရမည်ကိုသဘောပေါက်လာသည်။ PMO မပါ ၀ င်သော ၄၅ ရက် ((၄၅ ရက်မနက် PM၊ ၃၀ ရက်မရှိအို) ဖြစ်သည်။ ED ကိစ္စတွေပျောက်သွားတယ်။ မကြာခဏဆိုသလိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ရည်းစားနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမကြာခဏပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါသြဂုတ်လနှောင်းပိုင်း၌ငါတော်တော်လေး binged ဘယ်မှာရက်အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ED မပျောက်သေးပေမဲ့လက္ခဏာအချို့ပြန်ရောက်နေသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်စွမ်းမရှိတော့သည့်အပြင် porn ဖြင့်ပင်“ အလုံအလောက်ကောင်းသောအရာ” ကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲလာသည်။ ထို့ကြောင့်ငါသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်စွန့်ပစ်လိုက်သည်။
လိင်စိတ် / sex drive လိင်စိတ်
ဟိုင်းကောင်တွေ၊ ၂၁ နှစ်ပေါ့။ ဖိလစ်ပိုင်ကနေဟောင်း။ ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တုန်းကကွန်ပျူတာကစားခြင်း (ငှားရမ်းခြင်း) ကစားတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းကစားခဲ့ဖူးတယ်၊ ယောက်ျားလေးတွေကငါမှတပါးအပြာဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဖွင့်ပေးတယ်၊ ငါသည်အခြားကွန်ပျူတာဆိုင်များသို့သွားပြီးဝေးလံသောကွန်ပျူတာသို့သွားမည်။ ထို့ကြောင့်ငါသည် alt tabs များ၌ညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏ဒစ်ခ်ကိုအတို၏အိတ်ကပ်ထဲမှတစ်ခုသို့ထိ / တွန်းပါလိမ့်မည်။ ပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းကိုမြန်မြန်ပို့လိုက်တော့လက်တော့ပ်နဲ့ဖုန်းရတယ်။ အဲဒီတုန်းကငါတို့မှာဝိုင်ဖိုင်လည်းရှိတယ်။ အဲဒါကငါ့ရဲ့စွဲလမ်းမှုရဲ့အစပဲ။
ငါကောလိပ်ကျောင်းတက်တုန်းက 2017 ခုနှစ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားမယ်၊ ငါမိန်းကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်တဲ့အခါငါချိုနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလာတယ်။ ဒါကငါမှာပြproblemနာတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် PIED အကြောင်းမသိသေးဘူး ငါမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် (နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏ gf ဖြစ်လာသည်) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆက်ဆံသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဒစ်သည်ပျော့ပျောင်း။ မခဲယဉ်းပါ။ ထိုအခါငါပိုက်ကွန်ပေါ်မှာသုတေသန, ငါ PIED ရှိကွောငျးကိုငါသိ၏။ လပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ငါနောက်ဆုံးမှာစိုက်ထူခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံ။ လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုတင်ကြံစည်ခြင်းနှင့်ငါပြီးဆုံးတော့မယ့်အချိန်အထိလိင်ကိုကြိုတင်မျှော်လင့်သောအခါငါချိုသာလွန်းသည်။
ယခုကျွန်ုပ်၏ပြBနာမှာကျွန်ုပ်သည်ဒုတိယ၊ တတိယ၊ My gf က“ babe pls နောက်ထပ်ပတ်ပတ်လည်” ကိုအမြဲပြောတယ်။ သူမမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာ၊ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့အဖြူရောင်အသားအရေ၊ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရင်သားကင်ဆာအရွယ်အစားနဲ့ကြီးမားတဲ့ပတ်ပတ်လည်ရှိတာကြောင့်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ကိုပြန်ပေးဆပ်ရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမည်သူမဆိုအကြံပေးနိုင်ပါသလား။ ဒီတော့ငါဒစ်ခ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရလာတော့မယ့် Boobs (သို့) တင်းပါးကိုတွေ့တဲ့အချိန်ကိုပြန်ယူချင်တယ်။ ပြီးတော့လိင်ဆိုင်ရာအတွေးတွေကိုစိုက်ထူဖို့ပဲစဉ်းစားမနေပါနဲ့။
၁၇ ရက်၊ ED> ကနေလိင်ဆက်ဆံတာကိုအော်ဂဇင်စဖို့အထိ။
ဒီတော့ငါ porn နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိ ED အပေါ်အကြောင်းကို / မြင်ကြဗီဒီယိုများစတာတွေကိုဖတ်ရှုဖူးမရေနည်းနည်းအားထုတ်မှုသို့မဟုတ်ရလဒ်နှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင်အဘယ်သူမျှမ FAP ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ကိုယ့်အသစ်တစ်ခုကိုမိန်းကလေးကိုမြင်လျှင်စတင်ခဲ့ပြီး, ငါ့ ED ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တစ်လလောက်တွေ့ခဲ့ကြတာ၊ သူမအံ့သြသွားတယ်။ ကျနော်တို့နည်းနည်းပတ်လည်အရူးလုပ်ပြီး, ငါ့အဆုံး၌အများအားဖြင့်မအောင်မြင်ဘူး။ ED, လာနိုင်ခြင်း, PIV လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်းစိုက်ထူဆုံးရှုံးအလျင်အမြန်။
ငါဆင်းလာတယ် (ငါကရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာသိတယ်။ ) ငါ့ဘ ၀ မှာမနက်စောစောထင်းထည် မှလွဲ၍ ငါ့ဘဝမှာစိုစွတ်သောအိပ်မက်မရှိခဲ့ဖူးဘူး။ ငါဘာမှအလုပ်လုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးငါထင်တယ်
ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးညဥ့်, အကြှနျုပျ၏အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေ Taco နှင့်တီဗီ w ထွက်ဆွဲထားအိပ်ခန်းမှဦးဆောင်သောနမ်းသို့လှည့်။ ဘယ်သူမအပေါ်မဆင်းငါ့ထံသို့ပို့ဆောင်နှင့်သူမ၏ ကြိုးစားနေ အကျွန်ုပ်အပေါ်သို့ဆင်းလာသောအခါ၊ ငါတို့နမ်း၊ အိပ်ရာထဲမှာအိပ်နေကြတယ်၊ စကားပြော၊ ထပ်ခါထပ်နမ်းကြတယ်၊ တစ်နာရီလောက်အကြာမှာနောက်တစ်ခါပြန်နမ်းပြီးကျွန်မသူမကိုတို့ထိလိုက်တယ်။ သူမငါ့ကိုထိတယ်၊ လွှတ်လိုက်ပြီ၊ ခက်တယ်၊ PIV လိင်ဆက်ဆံတယ်၊ ခဲယဉ်းစွာခုန်! ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ အံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ ငါ့ ဦး ခေါင်းထဲမှာငါကစိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်စေ၊ တခြားဘယ်နေရာမှာမှမဟုတ်ဘဲသူမနဲ့အတူပျော်ပျော်နေတတ်တယ် ငါသူမကိုလာစေတယ်၊ ​​ပြီးတော့ငါသူမကိုတစ်ကိုယ်လုံးလာပြီး၊
ဒါကြောင့်ငါပျောက်ကင်းသွားသည်ဟုခံစားရသည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ခက်ခဲသောအနိုင်ရ (မရည်ရွယ်ဘဲအနိုင်ရ) အောင်ပွဲဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်သည်။ သူမသည်စူပါမထင်မှတ်သောသူဖြစ်၏။ ငါနှင့်အတူအပြတ်အသတ်စိတ်ရှည်သည်းခံ။ ငါအနားယူရန်ကြိုးစားနေသည်။
ငါ porn ထွက်ဖြတ်တောက်နှင့်ငါ့မှာသဘာဝလိင် drive ကို sublimate မှ fapping မဟုတ်နဲ့ငါ့အောင်မြင်မှုအများကြီး attribute ။
နောက်ခံ - ကျွန်ုပ်အသက် ၂၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ ငါအသက် ၁၁ နှစ်၊ ၁၂ နှစ်အရွယ်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုစတင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံး ၅ ကြိမ်သွားလေ့ရှိတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများဖြင့်သာကူညီလိမ့်မည်။ ပါဝင်သူ ၇ ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီး ~ ၁၄ နဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ အမြဲတမ်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကြောင့်ကျွန်မရဲ့တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်အပြင်ဘက်မှာလိင်နဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ထိုးနှက်ခံရတဲ့အလုပ်တွေကလွဲလို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်တစ်ခါမှမစမ်းသပ်ဖူးပေမယ့်တစ်ပတ်အကြာမှာလန်းဆန်းတက်ကြွတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့လို့ပါ။
ငါသတိထားမိသည်ပထမ ဦး ဆုံးငါစွမ်းအင်ပိုများနှင့်ငါလုပ်ခဲ့ဘူးသကဲ့သို့ခဏတာမှေးမှိန်ယူဖို့လိုအပ်ကြောင်းခံစားရတော့ဘူး။ ခဏတာမှေးမှိန်ခြင်းနှင့်အသားကျခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများတွင်ကျွန်ုပ်ပါဝင်သောကျွန်ုပ်၏လက်များပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်အချိန်များစွာရှိသည်။ ' ငါအများကြီးပိုပြီးအားကစားရုံသွားခဲ့တာ။ ငါကပိုသန့်ရှင်းပြီးပြင်ပကမ္ဘာကိုကြည့်ကောင်းအောင်ကြည့်တတ်လာတယ်။ ငါလုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့ပိုပြီးယုံကြည်မှုခံစားရတယ်။ အကြီးမားဆုံးမဲချခြင်းကမယုံနိုင်လောက်အောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီးငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးကျွန်မရဲ့စရိုက်ကိုနှစ်သက်သည်။ အခုတော့ဒီမြေတပြင်လုံးမျှ FAP အရာဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အစဉ်အမြဲငါဒီအခြေအနေကိုရနိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် ၁၀-၁၁ နှစ်တာကာလအတွင်းမခံစားခဲ့ရမှုကြောင့်သူမရဲ့အော်ဂဇင်ကိုမရရှိခဲ့ပါ။ အရာအားလုံးပေမယ့်။ ) ။ ဒါကြောင့်သူမရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်ကနေထွက်သွားတာဖြစ်ပေမယ့်ဒါကပုံမှန်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနဲ့အနည်းငယ်ကွာခြားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကြက်တစ်ကောင်ပါ။ သူမကသင့်ကိုသူမရင်ဘတ်ပေါ်ကို cum လုပ်ဖို့ပြောရင်မင်းကံကောင်းတာပဲ။
ဒါကကျွန်မခရီးရဲ့အစနဲ့အလယ်ပိုင်းပါ။ အဲဒီနောက်ရက်ပေါင်း ၈၀ လောက်မှာသူမကြိုးစားအားထုတ်မှုကနေအော်ဂဇင်ကိုရခဲ့တယ်။ ဒါဟာဘုနျးကွီးသောနှင့်ငါ့အသက်တာ၏အကြီးမားဆုံးဝန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ။ ပြproblemနာမရှိ, ငါသူမ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကနေဆင်းရ။ အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုယခင်ကထက်ပိုမိုခံစားခဲ့ရပြီး၊ ထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကြာမြင့်စွာပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ခံစားခဲ့ရသည်။
ကျွန်တော်သွားမယ့်ချည်မျှမ PMO ၏အကျိုးကျေးဇူးများကို vs PMO ၏အကျိုးဆက်များကိုပြသရနိုင်သလား?
ဒီနေရာတွင် (သင်ယောက်ျားတွေဆီက input ၏ alot ရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်) အနည်းငယ်နေသောခေါင်းစဉ်:
KEY ကိုထိုအခါ vs Now ကို
- ငါမိန်းမတွေကိုလုံးဝစိတ်မ ၀ င်စားဘူး VS ယခုငါသည်ထိုသူတို့ကိုန်းကျင်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန် horny ခံစားရတယ်ငါအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကို fantasize နဲ့ကျွန်မနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ချင်တယ်
-Consistent MO ကိုငါ့ကိုစွမ်းအင်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ညှစ်ခံစားရနှင့်ငရဲနဲ့တူငါ့အလိင်တံကိုထိခိုက်လုပ် VS ယင်း၏ကြောင့်အသေသတ်ခြင်းကိုအိမ်မှာရှိနေတဲ့မှနာကျင်အဆက်မပြတ်ညှစ်နှင့်မပြုလုပ်သင့်တူသောယခုပငျငါ့လိင်တံခံစားရ
-Because ငါ (ပဲညစ်ညမ်း) အမြိုးသမီးမြားကိုစိတ်ဝင်စား wasnt, ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကသူတို့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ညာဘက်တွေကိုပေးပို့မေ့သွားရော။ ငါယုံကြည်စိတ်ချမှု, ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကား, အသံသေံမှတဆင့်သူတို့ကိုအထင်ကြီးဖို့ကြိုးစားမေ့သွားရော VS ယခုငါအမျိုးသမီးတွေပိုမိုစိတ်ဝင်စား AM ကတည်းကငါ (မပါဘဲခြေနှင့်ရင်ဘတ်ထွက်မတ်တပ်ရပ်) ငါ့ကိုယ်အသိ alpha အထီးခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားမှတဆင့်အမျိုးသမီးတွေအထင်ကြီးစလေိုကွောငျးတှေ့ရ, ငါ့အသံသေံပိုမိုနက်ရှိုင်းဖြစ်ပါသည်, ငါ့အကြည့်ကိုပိုမိုပြင်းထန်သောပိုမိုနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်မှုများမှာ
ရုံလိင်တ္ထုများနှင့်မေ့သွားရောအထူးသဖြင့် (ငါသည်ဤများ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုတွေ့မြင်မေ့သွားရော) သူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ရန်လိုအဖြစ် -Before ငါအမျိုးသမီးတွေရှုမြင်ကြသည်။ အကြှနျုပျ၏ဦးနှောက်အဆက်မပြတ်ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များပျက်ခြင်းခဲ့ပါတယ်နှင့်ငါ့လိင်တံကိုအမြဲညှစ်ခဲ့သညျ။ ငါကပြည့်စုံရာဖြစ် wouldnt သိတယ်သော်လည်းရုံ၏မျက်နှာကို ထောက်. အချိန်မရွေးလိင်ဆက်ဆံချင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ့်ကြောင့်ဘို့အလိုငှါနောက်တဖန်မဆိုမိန်းကလေးထဲကဦးနှောက် fuck ဆိုတဲ့ချင်တယ်။ VS ကြောင်းနေဆဲစစ်မှန်တဲ့ရရှိထားသူအနေဖြင့်ကောင်းစွာ ha ယခုငါမိန်းမနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောနှင့်အများကြီးပိုပိုကောင်းနှင့်ရင်းနှီးသောလိင်ကတမူထူးခြားတဲ့လူသားအဖြစ်ကသူတို့ကိုသိရန်လာပြီတန်ဖိုးထား။
ကျေးဇူးပြု. ယောက်ျားတွေ, flatlining သူမြားနဲ့သူတို့နောက်ကျောကိုဖွင့်ကိုဘယ်တော့မှသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်မျက်မှောက်ဆုံးရှုံးတဲ့သူတွေကိုပြသနိုင်ဖို့ပဲချည်။ သွားစောင့်ရှောက်!
ငါ့အတွက်တော့ဒါဟာရိုးရှင်းပါတယ် စဉ်ဆက်မပြတ် PMO သည်နှစ်ပေါင်းများစွာလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်ကျွန်ုပ်အသည်းအသန်မနေနိုင်တော့ဟုဆိုလိုသည်။ ငါကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာတောင်ငါလိင်ဆက်ဆံတာကိုမပျော်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါငရဲလိုဆုံးရှုံးသွားမှာကိုကြောက်လို့ပါ၊ နှိုးဆွဖို့အတွက်ကိုယ့် ဦး နှောက်မှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို run ရလိမ့်မယ်။ ။ ဒါဟာဝေးကွာသော၊ အချည်းနှီးသောလိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့်၎င်းသည်၎င်းသည် shit ကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသည်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းကငါခဏ porn ရပ်တန့်, ငါ့အသက်တာ၌ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ငါအကောင်းလိင်ခဲ့နဲ့ကျွန်မတစ်သမတ်တည်းကရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ငါတကယ်လိင်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်အကြောင်းယုံကြည်မှုခံစားရတယ်။ ငါသည်ငါ၏အဖော်ထက်ထွက် numbed နှင့်ဝေးလံသောနဲ့အတူရင်းနှီးသလိုခံစားရတယ်။ လိင်န်းကျင်အားလုံး, ငါ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖွင့်မျိုးပျောက်ဆေးကြော။
ငါ့အဘို့ကြီးစွာသောလိင်ရှိသည်နှင့်တစ်ဦးစျေးပေါအတွက်ပိတ်ထားရဖို့နှစ်ခုရှုထောင်အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အားကိုးမရနိုင်ဖြစ်ခြင်း, အချည်းနှီးသောလမ်းနောက်ကွယ်မှ porn စွဲထွက်ခွာ၏စိန်ခေါ်မှုတရားမျှတရန်လုံလောက်သောထက်ပိုပါတယ်။
ဟောင်း Cynic ။ fap အောက်တိုဘာလုံးဝမ။ ED လား ရှုံးနိမ့် တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့သင်ငါ့ကိုမပေးနိုင်ဘူး။
အဘယ်သူမျှမ fap မတိုင်မီငါ up ပြုလုပ်ရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်အားလုံးပျက်ကွက်သောအဆက်မပြတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မအသက် ၂၀ ပဲရှိသေးတယ်၊ ဆရာဝန်ဆီသွားဖို့ဘောလုံးမရှိဘူး။ ငါမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းပြproblemနာရှိတယ်လို့မသိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မျှော်လင့်ချက်မရှိဘဲအဲဒါကိုဖယ်ရှားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကောင်းပြီ ၇၊ ည ၄ ညလုံးအတွက်ငါလှပသောမိန်းကလေးနှင့်အိပ်ခဲ့သည်။
ဒီ post အတွက်အကြောင်းပြချက်လား ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်မှာအပြားပြားရှိသော်လည်းသင်မူကားသင်ဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်။ ငါ့မှာတခြားအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါဂရုမစိုက်ဘူး။ နောက်ဆုံးမှာလိင်မှုကိစ္စပြုခွင့်ကိုရရှိတဲ့ရလဒ်တွေကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်။ ငါယခုငါသူမ၏ဖို့လှည့်သွားမယ့်အစားငါကျင့်သကဲ့သို့ကြောက်မက်ဘွယ်သောထက်စိတ်ကူးယဉ်။
ငါလူအချို့ကြိုးစားပြီးကျရှုံးတယ်ဆိုတာကိုသိပေမယ့် (ငါကံကောင်းတယ်၊ ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးလို့တောင်မှမထင်ခဲ့ဖူးဘူး) ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုပေးဆပ်ရကျိုးနပ်တယ်လို့ငါထင်တယ်၊ အထူးသဖြင့် ED ကမင်းအတွက်ပြifနာတစ်ခုဖြစ်ရင်တောင်မှသူဟာသွားပေးဖို့အကြံပေးလိုတယ်
ဒုတိယအချက်နှင့်နောက်ဆုံး၊ လုပ်နေသည့်အချိန် - သတင်းများ
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည် PMO အကြားဆက်သွယ်မှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ငါ2ပတ်အအေးကြက်ဆင်သွား၏။ ထို့နောက်ငါစိတ်ကူးခဲ့လိင်ခဲ့ရသည်။ ငါမိန်းကလေးနှင့်အတူဆက်ဆံရေးသို့ရတယ်ကျနော်တို့အတူတူတစ်နှစ်ခန့်ခဲ့ကြသည်။ သူမနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်နေတုန်းမှာသူမနဲ့မိုက်မဲတဲ့ porn ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်ငါသဘောတူခဲ့တယ်ဆိုတာမသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူမနှင့်ငါဆက်ဆံရေးတစ်ခုလုံးကိုတစ်လျှောက်လုံးအလွန်ကြီးစွာသောလိင်ဘဝကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်ဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်သွားပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအားဖြည့်မှုခံနေရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် MO-ing ကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးခဲ့ပြီးနောက် PMO-ing ကိုထပ်မံကျင့်သုံးခဲ့သည်။ i PMO-ed ကို 17 လ၊3ပတ်အကြာအထိ PMO-ed လုပ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်မှာကျွန်ုပ်တို့၌အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဓာတုဗေဒရှိသည့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။ အမှုအရာအလွန်လျင်မြန်စွာအိပ်ရာစင်မြင့်သို့သွားကြ၏။ ငါမအောင်မြင်ဘူး
ဒါက2ပတ်လောက်ကပေါ့။ ထို့နောက်ငါနောက်တဖန် PMO-ing ဆေးလိပ်ဖြတ်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကမိန်းကလေးနှင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ဖန်အိပ်ရာထဲ၌ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်ထပ်မံကျရှုံးခဲ့သည်။ အလွန်ရှက်စရာကောင်းပေမယ့်သူမကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှတစ်ဆင့်ငါ့ကိုအော်ဂဇင်ပေးရန်လုံလောက်သည်။ ဒါတောင်မှကျွန်တော့်လိင်တံကဖြစ်သင့်သလောက်မခက်ဘူး။ ဒီတော့ဒီနေ့က P: ၁၆ ရက်၊ M က ၂ ရက်၊ အဘယ်သူမျှမအို: 16 ရက်။ M နှင့် O သူမနှင့်ပြုမိခဲ့သည်။ ငါအခုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလည်းအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်ပါတယ်။ ငါအစီအစဉ်နှင့်အတူဆက်လက်ငါနေပါတယ်။
တစ်ချိန်ကဒီအနတ္တကို ၁၇ ပတ်ကြာအောင်လုပ်ပြီးသင်ခန်းစာမသင်ယူဘဲပြီးသွားတဲ့လူထုံတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရမ်းဂုဏ်ယူတယ်၊ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကမှ စ၍ ကျွန်ုပ်သည်သူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုလျှင် အခါတိုင်း - အချိန်များ, အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်နေ့။ ငါအရမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ဤအမှန်တကယ်ပျော်မွေ့ခဲ့သည် ယခုငါတကယ်လိင်စိတ်ကိုသိခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်အိပ်ရာပေါ်ရှိမိန်းကလေးများမည်မျှကြိုက်နှစ်သက်သည်ကိုသိခြင်းသည်သုံးလ PMO အရက်အလွန်အကျွံသောက်ပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်၏ Mojo ကိုပြန်လည်ရရှိရန်ပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တကယ်စိတ်နာမိပါသည်။ ငါနူးညံ့သိမ်မွေ့စွာထားရန်, ကိုယ့်ကိုယ်ကို pissed နေပါတယ်။
အခုတော့ငါတကယ်မိန်းကလေးသည်ငါနှင့်အတူအလုံအလောက်စိတ်ရှည်ရှည်နှင့်အမှုအရာကောင်းစွာအဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံကနေဒီဟာကိုငါအရင်လုပ်ခဲ့သလိုမျိုးလုံးဝလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ နေဆဲ, လိင်စိတ်မရှိခြင်းငါ့ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အကြုံနေရငါကဲ့သို့ - ငါ့ကိုဖိစီးနေသည်။ အထူးသဖြင့်သာမန်အခြေအနေများတွင်သာမန် ဦး နှောက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ ဦး နှောက်နှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုရလိုသောလူတစ် ဦး ရှိလျှင်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ကျေနပ်မှုရစေသည်။
ကိုယ့်တိုးတက်မှုအထိမ်းအမှတ်အခါအားလျော်စွာကဒီမှာ post ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်အခြားသူလူတိုင်း PMO အောင်မြင်မှု၏အရုပ်ဆိုးအရိပ်တိုက်ခိုက်နေအလိုရှိ၏။ ဒီ doable ဖြစ်ပြီးအဲဒါကိုလုံးဝကျိုးနပ်သည်။
ခိုင်ခံ့သွား 28 ရက်ပေါင်း (ရလဒ်များကို!)
fellas ဟေ့, ဒီ nofap မှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။ အလယ်တန်းကျောင်းကတည်းကမိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူဖူး။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဆိုးကျိုးများခံစားနိုင်သကဲ့သို့အလုံအလောက်ရှိခြင်း (လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်၊ အမျိုးသမီးများနှင့် ED၊ စွမ်းအင် / လှုံ့ဆော်မှုနည်း) ။ ဒါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၈ ရက်ကကျွန်တော်ထွက်သွားပြီးဘယ်တော့မှပြန်လှည့်မကြည့်ဖူးဘူး။
ငါ porn / FAP အအေးကြက်ဆင်နုတ်ထွက်နှင့်ပြီးကတည်းကပြန်ကြည့်ကြပြီမဟုတ်။ တစ်ခါတလေရမ္မက်ရပေမယ်ငါသည်သင်တို့၏ပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီ site ပေါ်တွင်ခုန်ခြင်းနှင့်ငါတံဆိပ်တော်တော်လှုံ့ဆျောဆိုရပေမည်။
ရလဒ် - ငါဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးကတည်းက ED လက္ခဏာမပါဘဲမိန်းကလေးသုံးယောက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်။ ကျွန်မကမိန်းမတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကြားမှာပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိတယ်။ ဒီအချိန်မှာငါတစ်ပတ်ကို 3-4x အားကစားရုံကိုသွားပြီးကျန်းမာစွာစားပြီးအိပ်ရေးဝဝအိပ်နေရတယ်။
ငါကပိုလူတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်။ ငါကအားအင်ပြည့်ဝတယ်၊ ယုံကြည်မှုရှိတယ်၊ ယခင်နှစ်များအတွင်းလိင်စွမ်းအင်အားလုံးကိုအင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုခြင်း၌သုံးစွဲခဲ့သည်။ ယခုအခါ၎င်းသည်ဖန်တီးရန်အတွက်အိပ်ရာပေါ်လှပသောအမျိုးသမီးများနှင့်ပျော်မွေ့ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ငါဘယ်သူ့ကိုမှရန်ဤအကြံပြုလိမ့်မယ်။ ယခုတွင်ငါသည် Porn / Fapping ယောက်ျား psyche ဖို့ဘယ်လောက်အဖျက်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ရှေ့မှာထိုင်လျက်နေသောသူအပေါင်းတို့ဖြုန်းနှစ်ပေါင်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်ငါဘဝအသစ်တစ်ခုဇာတ်စင်ရိုက်ထည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားထက်ပိုဖြစ်၏။
ငါဒီ post ကိုဒီမှာလူတိုင်းကိုပြောတာပါ၊ ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကောင်းမှုကို ED ရောဂါပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ပေးတာမရှိဘူး။ မနေ့ကငါမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ PIV လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာငါကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့အဆုံးသတ်စရာမလိုတော့ဘူး။ ဒါ့အပြင်ဒါကကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံး (ကောင်းသော၊ ဆိုးခြင်း၊ ရုပ်ဆိုးခြင်း) အကြောင်းရေးသားရန်စီစဉ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်နေ့ ၉၀ ရောက်သောအခါ။ (LINK)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုလိုတာက၊ သင်က porn-induced ED အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်ဒီမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်၊ ငါဒါကိုစမ်းကြည့်ဖို့ပြောမယ်၊
အမှုအရာကောင်းကောင်းသွားဆက်လက်နေကြသည်။ ငါယခုငါ့အဘယ်သို့သောအရာကိုနှင့်ငါ့ဆက်ဆံရေးပိုမိုတိုးတက် ... ငါ GIRLFRIEND ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါတရားဝင်ပါပဲ ငါသူ့ကိုတကယ်ချစ်တယ်
လိင်သည်ကောင်း၏။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်သဘာဝလှုံ့ဆော်မှုများကိုပိုမိုတုန့်ပြန်သည်ဟုခံစားရသည်။ စိုက်ထူခြင်း, ဖြစ်လာမှပိုမိုမြန်ဆန်ကြာကြာကြာရှည်, ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လိင်ပိုပြီးပျော်စရာဖြစ်လာသည်။ တကယ်တော့၊ သင်ချစ်မြတ်နိုးပြီးချစ်သူတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ငါပြောမယ်လို့ငါမထင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်လိင်ကအံ့သြစရာပဲ! ဒါ့အပြင်ငါက "အသံကျယ်" ဟားဟားဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှမ! အဲဒီမှာသတင်းကောင်းပေမယ့်ဘာမျှမ။ အခုငါတို့သုံးကြိမ်လောက်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးပြီ။ ဒုတိယနဲ့တတိယအကြိမ်ငါကွန်ဒုံးနဲ့အော်ဂင်စလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်“ ပျောက်ကင်း” သည်ဟုပြောရန်တွန့်ဆုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ယခင်ကထက်လုံးဝကောင်းမွန်သည်။
2 ပတ်ကြာ P ကိုအခမဲ့ခဲ့စဉ်
ငါ P2ပတ်ကြာ (M တစ်ပါတ်အခမဲ့) အခမဲ့ခဲ့ပေမယ့်ငါရက်အနည်းငယ်အကြာသာအာရုံခံစားမှုမှတဖန် M ကစတင်ခဲ့သည်။ အခုတော့ကျွန်တော်ဟာချိုချိုသာယာတဲ့ကောင်မဟုတ်ပေမယ့်ကျွန်မရဲ့လိင်တံကိုဆွဲထုတ်ပြီးစတင်ဖောက်ထွင်းလိုက်တဲ့အခါ၊ ကျောက်တုံးကျောက်တုံးတွေ၊ ငါမိန်းကလေးများအကြောင်းသိပ်စိတ်ကူးမထားပါ (ထိုသို့ပြုလျှင်ကျွန်ုပ်ကိုချိုစေလိမ့်မည်မဟုတ်) ။ ဒါဟာအရမ်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီး ၅ မိနစ်အတွင်းမှာပဲငါသုတ်ရည်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အော်ဂဇင်သည် PMO ကဲ့သို့ပေါက်ကွဲခြင်းမဟုတ်သကဲ့သို့ chaser သက်ရောက်မှုလည်းမရှိပါ။ ငါ P. အပေါ်ချိတ်ဆက်ကတည်းကငါနှစ်ပေါင်းများစွာကျေနပ်ဖွယ်ဤလမ်းပြီးအောင်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ငါအချို့ rebooting / rewiring ကျိန်းသေသွားခဲ့ထင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည် P ကိုအခါအားလျော်စွာပြန်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် P ကိုများစွာဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။ ငါမိန်းကလေးအချို့နှင့်လည်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါ (သူတို့ကစူပါကြာမြင့်စွာမကြာသော်လည်း) သူတို့ကို cuddling အချို့သောလျောက်ပတ်သောစိုက်ထူတယ်ပေမယ့်လျော့နည်းဒါငါချိုရာဘူးမဟုတ်သည့်အခါ။
အခြားမည်သူမဆိုအလားတူအတွေ့အကြုံများရှိသနည်း မင်္ဂလာပါဒါပေမယ့်သင် M'ing ကို P မပါဘဲစတာတခါကဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်လား ဤနည်းဖြင့်အလုပ်ပြန်လုပ်နေသလား။ ငါလုံးဝဆန့်ကျင် abstinence နှင့်အတူတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဒါပေမယ့်ငါနေသမျှကာလပတ်လုံးငါအချို့ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမ်အချို့ရသမျှကာလပတ်လုံး P ကိုစဉ်းစားကြပြီမဟုတ်
အောင်မြင် 100 နေ့ကရည်မှန်းချက် !!
ဒါကြောင့်ယနေ့ငါ 100 ရက်ပေါင်းထိမှန်နှင့်ဤငါ၏အ NoFap ကွှေးကျွောခွငျးဖွစျသညျ။ ဘယ်တော့မှမဘဝမှာငါဒီရှည်လျားသောအဘို့အကြှနျုပျ၏ဒစ်၏သွားလာရင်းပါစေရန်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပေမယ့်ငါက ED smh ကုသပေးဖို့လိုအပ်ပါကသိခဲ့ပါ။
ငါသာမန်အရပ်သို့ပြန်သွားပြီးဆေးလုံးမရှိဘဲမိန်းကလေးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသည်။ အခု ၁၀၀ ရက်အကြာမှာဒီမှာငါပျောက်ကင်းသွားပြီ၊ အမြဲတမ်းချိုသာနေပြီးငါ့ရဲ့“ လူသတ်သမားဗီဇ” ကိုပြန်ယူလိုက်သလိုခံစားရတယ် ဒါပေမယ့်သတိထားပါ၊ သတိပြုပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ ထိကျွန်ုပ်သည်ပြည့်စုံသောမြင်းစီးသူရဲတစ် ဦး ကဲ့သို့ခံစားနေရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါ၏အရဲရင့်အားလုံးလိုပဲလွတ်မြောက်ရန်သို့မဟုတ်လွှတ်ပေးရန်ရှာဖွေနေသည်။ ပိုဆိုးတာကငါဟာ ၃ ပတ်လိုတင်မရသေးဘူး။ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကူညီရန်လိင်မရှိပါက၎င်းသည်ခက်ခဲသည်။ ငါတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းငါခရီးကိုဆက်လက်။ ငါဘယ်တော့မှပြန်သွားပြီးဒီအလေ့အကျင့်၏ကျွန်ဖြစ်ချင်တယ်။ တစ်ချိန်ကကျွန်တော့်ကိုပျက်စီးစေခဲ့တယ် တစ်ချိန်တည်း၌တစ်နေ့လျှင်ခိုင်ခံ့သောယောက်ျားများနေပါ။
ဒါနဲ့တစ်ခု 11 နေ့က Streak ပြီးနောက်မကြာသေးမီကပြန်ရောက်သွားတယ်, နောကျတစျနေ့ကငါ woohoo, ချလေ!
ငါတင်လိုက်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၊ Ive သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ကြိုးစားခြင်းများ၌ ED သို့မဟုတ် PE (သို့) နှစ် ဦး စလုံးခံစားခဲ့ရသည့်အခါများ၌ဖြစ်သည်။ ငါထင်တာကမိန်းကလေးအသစ်နဲ့ပထမဆုံးအာရုံကြောဖြစ်လို့လို့ပဲ။ ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ MO'ing ကိုတစ်လမှာသုံးကြိမ်လောက်လုပ်ပြီးနောက်၊ ငါဟာအစကတည်းကခက်ခဲလွန်းခဲ့ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ပြissueနာမရှိခဲ့ဘူး။
ဒါ့အပြင်လိင်ဟာဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလဲသတိရစေပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုတောင်မှ“ အမှန်တရား” နဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့မရဘူးဆိုတာပါပဲ။ ငါညစ်ညမ်းသောအကျင့်စွဲလမ်းကိုအတန်ငယ်ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပြီးထပ်မံထပ်မံဖြစ်ပွားလာ ဦး မည်ဖြစ်သော်လည်းဤအတွေ့အကြုံအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်သည်စစ်ပွဲကိုကျွန်ုပ်လုပ်သမျှကာလပတ်လုံးတိုက်ပွဲဝင်ရန်သန္နိcommitted္ဌာန်ချထားပါသည်။
လတ်တလောနေ့ (၂) တွင်မကြာမီအချိန်ဖြုန်းရန်အလားအလာမရှိတော့သဖြင့်နေမကောင်းဖြစ်နေသည်မှာ (၁၆) ရက်ရှိပြီ။ PMO သည်စွဲလမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပုံမှန်အပြုအမူမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အတွက်ကျန်းမာရေးမကောင်းပါ။ အဲဒါကိုတွန်းလှန်ခြင်း၊ သင်အများစုသိတဲ့အတိုင်းတစ်ခါတစ်ရံမှာမဖြစ်နိုင်တာကိုခက်ခဲတယ်လို့ခံစားရပေမယ့်ဆက်လုပ်ပါ။ tl; dr - NoFap ကငါ့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာတွေကိုကုသပေးခဲ့တယ်၊ ဒါကတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာငါတကယ်ယုံကြည်တယ် !!
LINK - 90 ရက်အကြာမှာအကြှနျုပျ၏ရလဒ်များကို
ငါတစ်စုံတစ်ဦးချိန်းတွေ့စတင်အကြောင်းကိုကြောင့် Nofap စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ငါ့ယခင်ဆက်ဆံရေးအတွက်ပညာရေးနှင့်အခြားပြဿနာများကိုအတူခံစားခဲ့ရဖူး။ အရင်တုန်းကငါကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်ပြန်လည်စတင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းယခုတကြိမ်တွင်၎င်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန် ပို၍ မြင်သာသောအကြောင်းပြချက်ရှိခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလေးစားမှုကိုမြှင့်တင်ဖို့ NoFap ကိုမလိုချင်ဘူး၊ မိန်းကလေးတစ် ဦး တစ်ယောက်နဲ့ငါ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတိုက်ရိုက်တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ NoFap ကိုလိုချင်ခဲ့တယ်၊ ဒါကရက်ပေါင်း ၉၀ လုံးလုံးလုပ်ဖို့ငါတွန်းအားဖြစ်ပုံရတယ်။
အခြေအနေတွေကအစကောင်းခဲ့ပေမဲ့ပြားချပ်ချပ်နဲ့ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကမစွမ်းဆောင်နိုင်လောက်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုဆီသို့ ဦး တည်သွားခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်လိင်အင်္ဂါချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်လိင်စိတ်နည်းလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်စေသည်ဖြစ်စေမသေချာသော်လည်းမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းသည်ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းအနိမ့်ဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရွေးရန်အခွင့်အလမ်းသည်နောက်ထပ် ၃ ပတ်မလာခဲ့ပါ၊ ထိုအချိန်တွင် Nofap ၏ရလဒ်များအလွန်ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ ငါစိုက်ထူမှုသုညနဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဆုံးမှာတော့ပြfinishingနာတွေရှိနေဆဲ၊ ကံကောင်းတာကတော့လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲရှင်းလင်းသွားတယ်။ ဒါနဲ့ ၄၅ ရက်လောက်ကြာတော့ငါဟာအခြေခံအားဖြင့်လုံးဝပြန်လည်အခြေချပြီး PMO ကိုဆက်လက်ရှောင်ကြဉ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသောအချိန်ရှိခဲ့သည်။
တကယ့်ပြtheနာကဆက်ဆံရေးဟာအတော်လေးရှည်လျားပြီး၊ ငါလစဉ်သုံးပတ်စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ၃ ရက်လောက်မှာကျွန်မရဲ့ရည်းစားကိုသာတွေ့နိုင်တယ်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ထိအဆက်အသွယ်မရှိခြင်းကပြန်လည်သက်သာလာရန်တွန်းအားများကိုဖြစ်စေသည်။ ငါ့ကိုတားဆီးနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကရလဒ်တွေဘယ်လောက်အံ့သြစရာကောင်းလိုက်သလဲ၊ ပြီးတော့ငါ့ဘဝမှာပုံမှန်လိင်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်း။ လမ်းတစ်ဝက်လောက်မှာကျွန်မရည်းစားနဲ့ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူမဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ သူမအစမှာသူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီ့အတွက်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာမရှိခဲ့ပါဘူး။ သူမကဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာသူသိပြီးငါ့ကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်မခက်တာလဲဆိုတာကိုသိရတာကတကယ်တော့အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုအကူအညီဖြစ်စေခဲ့တယ်။
ဒါဆိုအခု ၉၀ မှာ ၁၀၀% သေချာပေါက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့ NoFap ဟာကျွန်တော့်အတွက်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ fap ဖို့တိုက်တွန်းမှုရသေး, ဒါပေမယ့်ငါကငါ porn ၏စဉ်းစားကြောင့်မဟုတ်, ငါ့ရည်းစားစဉ်းစားသောကြောင့် NoFap ၏မမြင်နိုင်သောရလဒ်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်ကကက်စကိတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျွန်ုပ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ငါ့ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာပျင်းနေတဲ့ထိုင်ခုံတွေဟာများသောအားဖြင့်အငွေ့ပျံစေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဟာငါ့ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဝေးကွာသွားအောင်ဘာမှမလုပ်ပဲနေဖို့၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အိမ်မှထွက်သွားဖို့ကြိုးစားတယ်။
ငါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်၊ စားရန်၊ စားရန်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းများအကြောင်းကျွန်ုပ်၏အချိန်ကိုရှာဖွေပြီးကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်မည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့သည်။ ဤအရာအားလုံးကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် (၃) လပြန်လည်စတင်ချိန်တွင် (၁၇) ပေါင်ကျသွားပြီးလုံးဝမမျှော်လင့်သောရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခရီးစဉ်, ငါဒီအသိုင်းအဝိုင်းထွက်နှင့်အတူလုပ်ဖို့နိုင်ခဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
TL: 90 ရက်အကြာမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ် DR တန်ချိန်
LINK -PIV အလုပ်လုပ်ခဲ့! - ဒီတော့ပျော်တယ်၊ ငါမယုံနိုင်သေးဘူး! ဒီနေ့မနက်ကကျွန်ုပ်၏ gf နှင့်လိင်အင်္ဂါလိင်တံသည်လိင်အင်္ဂါကိုလိင်ဆက်ဆံလျှင်ငါလာသည်။ ဒီတစ်လျှောက်လမ်းတစ်ဝက်ပျော့ပြောင်းပြီး ၂ လအကြာမှာလုံးဝအိပ်မက်တစ်ခုမက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမတွေးခဲ့ဘူး။ YNWA
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ငါ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိဘဲ 172 ရက်ပေါင်းယနေ့ဖြစ်ကြောင်းကို။ porn အရာအားလုံး wrecks ကြောင့်နောက်တဖန်ငါ၏အဟောင်းများကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖြစ်ခြင်းကိုစတင်ရန်အလွန်ကောင်းသောခံစားရရုံတစ်ခုလုံးအများကြီးပိုကောင်းနှင့်ပညာရှိ။ တကယ့်စတင်သည်ရှိရာဦးနှောက် Rewiring ဖြစ်ပါတယ်။ ငါနေဆဲဆင်းဖို့ရန်ရှည်လျားသောလမ်းရှိသည်, ဒါပေမယ့်နီးပါး6လအတွင်း!
sayno2porn ဇွန် 16, 2012
စိုက်ထူခြင်းဟာတစ်ခါမှမကြုံဖူးအောင်ခဲယဉ်းသည်။ အခုငါ့စွဲလမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်သကဲ့သို့ငါခံစားနိုင်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမယ့်ငါ PM ဆီကိုဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။
ငါမနက်တိုင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်လေ့ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်မနက်မှာလိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုကိုခုခံတွန်းလှန်ဖို့အရမ်းခက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတကယ် M ကိုမလုပ်ချင်ဘူး၊ ငါတကယ်စစ်မှန်တဲ့လိင်ကိုလိုချင်တယ်။ ဒါကငါ့ရဲ့ပန်းတိုင်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေ့တိုင်းပြောနေတာငါဒီနေ့မိန်းကလေးတချို့ကိုမေးလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ငါတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုချဉ်းကပ်ရန်အခါတိုင်းငါ၏အယုံကြည်မှုကျဆင်းခဲ့သည်။ ငါစိတ်ထဲမပြောနိုင်ဘူး၊ ငါ့စိတ်ကသူမငါ့ကိုငြင်းပယ်မယ်ဆိုရင်ငါစဉ်းစားတော့တာပဲ၊ ငါဟာလုံလောက်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းမရှိဘူး၊ အိုဟင့်ဒီလူအားလုံးစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူး ... bcoz ရဲ့ငြင်းပယ်ခံရမှုဟာအရာအားလုံးထက်ပိုပြီးစိတ်ထိခိုက်ရလိမ့်မယ်။
ငါကမိန်းကလေးမရှိခြင်းကိုစိတ်ထိခိုက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ (ဒီပုံကိုငါကြည့်လိုက်တာနဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုနဲ့စွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းနေတာ) ဒါပေမယ့်ငြင်းပယ်မှုတွေကဒီထက်ပိုပြီးနာကျင်ကိုက်ခဲတာနဲ့ငါနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အခွင့်မရှိဘူး။ ငါပြောင်းလဲချင်တယ်ငါ IM နှင့်အတူကျွေးမွေးကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောင်းလဲပစ်ချင်တယ်။
ငါ၏အ PIED ကုသတိုးတက်မှု (သင်ကျေးဇူးတင် NoFap!)
ဟေ့ယောက်ျားတွေ၊ နောက်ခံအကျဉ်း။ ငါ ၂၅ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး။ ငါ 25 နှစ်အရွယ်ကတည်းက porn နှင့် PMO နှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောခြောက်နှစ်ကကျွန်ုပ် gf နှင့်အတူရှိစဉ်စိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အခက်အခဲရှိကြောင်းပထမဆုံးအကြိမ်သတိပြုမိခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်လုပ်တောင်မှကျွန်တော်မထနိုင်ခင်အထိကျွန်တော်ဒီကိုအာရုံမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ငါကြောက်တယ်၊ ဆရာဝန်စုံတွဲတစ်တွဲတွေ့ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကဆေးလုံးကိုသာဆေးညွှန်းလိုက်ကြပြီးကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာအားလုံးရှိနေသည်ဟုပြောခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်ငါဆေးပြားပေါ်နေစဉ်ပင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းစဉ်အတွင်းစိုက်ထူရှိသည်မဟုတ်နိုင်မီ, ခေတ္တသာအလုပ်လုပ်ခဲ့သောဆေးပြားများအတွက်ဖြေရှင်းခဲ့ရသည်။ ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မှာထိုဆက်ဆံရေးသည်ကြာရှည်မသွားခဲ့ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းအဖြစ်မှန်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှလွတ်မြောက်ရန်ကျွန်ုပ်တိုက်ခန်းတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနည်းဆုံးတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်သော့ခတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးမှားသွားတယ်။ အရင်ကမကောင်းခဲ့ဘူး။ ) -
ငါ porn ကြည့်နေစဉ်နှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်ပင်ခက်ခဲရနိုင်ဘူးရှိရာအမှတ်တယ်။ လွန်ခဲ့သော ၁၈ ရက်ကကျွန်ုပ်သည် YBOP နှင့် NoFap တို့ကိုထိ မိ၍ ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြောင်းလဲရန်ကျိန်ဆိုခဲ့သည်။ ငါ NoFap ခရီးကို hard mode နဲ့စတင်ခဲ့တယ်၊ ငါ့ porn folders တွေအားလုံးကိုဖျက်လိုက်ပြီး web blocker ကိုတပ်ခဲ့တယ်။ ၁၈ ရက်ကြာပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးနံနက်သစ်သားသည်ယနေ့တွင်လွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်ကျော်ကတည်းကရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၁၀၀% စိုက်ထူခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ၇၀-၈၀% ပြောနိုင်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်မျှသာကြာသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်၏ PIED ကိုယခင်ကထက်ပိုမိုကုသရန်ပိုမိုနီးကပ်စွာရှိနေသည် ။
ယခုငါဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဘဝပုံစံကိုလိုက်လျှောက်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည်ထက်ပိုသည်။ ငါ့ကို <3 ဘာမှမမေးမြန်းဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်
ကျေးဇူးတင်ပါသည် NoFap နှင့်ခိုင်ခံ့သောနေဖို့။
(မှတ်ချက် - ဤယောက်ျား၏အလိုင်းကာလသည် ၃၅ ရက်ခန့်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သူသည်လိင်မှတဆင့်အော်ဂဇင်ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်သူ၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုပုံစံသည်ပုံမှန်ထက် ပို၍ ကြာနိုင်သည်။ )
ငါမှတ်မိနေသမျှကာလပတ်လုံး ED ကိုဖွင့်ပြီးပိတ်ထားသည်။ ကျွန်တော်အသက် ၁၇ နှစ်မှာစခဲ့တာပါ၊ လုံးဝပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူး။ အခုအသက် ၂၅ နှစ်ရှိပြီ။ ငါအသက် ၁၃ နှစ်လောက်လောက်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်၊ အဲဒီလိုမရှိဘဲရက်အနည်းငယ်လောက်ငါဘယ်တော့မှမသွားခဲ့ဘူး။ ငါမိန်းမတွေနဲ့ဆွဲဆောင် / အပြန်အလှန်ဆွဲဆောင်ပြproblemsနာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်တော့မှ, ငါအမြဲတမ်းယုံကြည်စိတ်ချရသော, လူမှုရေးကောင်လေးအမြဲတမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါပြောခဲ့သည့်အတိုင်း“ စွဲလမ်းမှု” များစွာရှိခဲ့သော်လည်း (YBOP ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်စာဖတ်ခြင်းပြီးနောက်) ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင် (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရက်အနည်းငယ်အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်) များစွာရှိခဲ့ဖူးသည်။ / r / nofapကျွန်ုပ်၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော၊ ရှက်ရွံ့မှုနှင့်မကြာခဏစိတ်ဖိစီးစေသော ED ၏အကြောင်းရင်းများသည်ညစ်ညမ်းခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်သည်။
Viagra ကိုကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တာ၊ တစ်ပတ်လောက်ပဲကြိုးစားတာ၊ ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒီတော့ဒီမှာတခြားသူတွေလိုငါစိန်ခေါ်မှုကိုခံယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဒီနေ့ကို ၆၀ အထိလုပ်ခဲ့တယ်။
ဒါငါ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးငါအရှည်ဆုံးပဲ။ ကံကောင်းတာကကျွန်တော့်ကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ GF တစ်ခုရှိတယ်။ ED ကဘယ်အချိန်မှာမဆိုသူ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာငါပြောနိုင်တယ်။ ငါသူမအပေါ်တွင်များစွာအကျိုးသက်ရောက်သည် (သေချာသည်မှာသူမကျွန်ုပ်နှင့်အတူအမြဲရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်မိသည်) ။ ပထမ ဦး ဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့ငါအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည် - ငါအရင်ကကဲ့သို့ငါ၏အအဖွဲ့ဝင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါဟာကြီးစွာသောနိမိတ်လက္ခဏာပဲ! တစ်လျှောက်လုံးခက်ခဲစွာနေရခြင်း၊ ရာထူးပြောင်းခြင်း၊ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၊ လုံးဝပြproblemနာမရှိပါ။ ငါအရင်ကဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး
ပြီးတော့တစ်နေ့ ၃၆-၄၀ လောက်လောက်မှာ၊ ခက်တယ် ၁၈၀ ပြည့်ပြီးပြီ။ လုံးဝပျောက်မသွားဘူး အခုဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာငါတစ်ဝက်ခဲယဉ်း (PIV လိင်များအတွက်အနိုင်နိုင်) ရနိုင်ပြီးမကြာခဏအလွန်လျင်မြန်စွာလာ။ ဒါကမယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ပျက်စရာကောင်းပြီးခက်ခဲခဲ့ပါတယ်၊ ဒါကပထမဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတာပြသခဲ့တယ်။
အပြုသဘောထားထိန်းသိမ်းရန်ခက်ခဲသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ရက် ၉၀ သို့သွားမည်ကိုသေချာသိသည်။ fapping ဟာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တယ်။ အဲ့တာကိုတကယ့်အရာထက်ပိုပြီးလိုချင်ခဲ့တယ်၊ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းသာရှိသောသူများအတွက် - ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ သင်လုံးဝဒါလုပ်နိုင်ပါတယ် ငါလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး
TL; DR: ED ငါ့အလိုရှိသမျှအသက်, လုလင်ပျိုကခိုင်မာတဲ့တည်းခို, !, Bam flatline အလုပ်လုပ်တယ်, nofap စတင်
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကငါမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ချိန်းတွေ့ရင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ခဲ့တယ်။ ED နဂါးကငါ့ဘ ၀ ကိုသူ့ ဦး ခေါင်းထဲဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်မတို့ချိန်းတွေ့ပြီး ၆ လအကြာမှာသူမကဖုန်းပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတစ် ဦး ရဲ့လိုအပ်ချက်ကမှန်နေလို့လား။ သူမအပေါ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသော်လည်းကျွန်ုပ်စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုံးချုံးကျသွားတယ်။ ငါထင်တာကတော့ဒီမိန်းကလေးက ED ပဲမဟုတ်ဘူး။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်အခြားပြproblemsနာများစွာရှိသည်။ အိပ်ခန်းကိုပြproblemsနာကပိုဆိုးစေတယ်။
တခါတရံမှာငါတို့ဟာလိင်ဆက်ဆံပြီးအရာအားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ အခြားအချိန်များမရှိ။ ဒါကြောင့်ငါဇန်နဝါရီလပတ်လည်မှာရှိတဲ့သင့် ဦး နှောက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်ငါထိမိခဲ့တယ်။ ငါနဲ့အခြားလူတွေရဲ့အရေးကိစ္စတွေရဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ခဲ့တယ်။ လပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးငါနေကောင်းသည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်းသည်ပုံမှန်အလုပ်များနေခဲ့သည်။ ငါ Champ နဲ့တူခံစားခဲ့ရ! ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့တွန်းအားကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ရုံသာမကအနည်းဆုံးတော့ငါထင်သည်။
ငါ့ဘဝ၏အခြားရှုထောင့်များတွင်ကြီးမားသောအပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သေးငယ်သောအရာများကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ခြင်းဖြင့်စတင်ထွက်ခွာခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုအသစ်တွေ့ရှိသောယုံကြည်မှုသည်အမှောင်ထုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါလိင်သွားသည်အထိငါအတော်လေးရိုင်းစိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါများစွာသောမိန်းမနှင့်လိင်ဆက်ဆံစတင်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော ၆ လတာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်ဘဝတလျှောက်လုံး၌မိန်းမများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းပိုခံခဲ့ရသည်။ ငါကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၄ ယောက်ကနေ ၂၃ ယောက်လောက်သွားတယ်။ ဒီတွေ့ကြုံမှုအများစုဟာမတော်တဆဖြစ်ခဲ့တာပါ၊ နောက်ထပ်ဘာမှမလုပ်လိုတဲ့စိတ်မရှိ ဒါပေမယ့် ... ငါ ballsy ဆည်းပူးခဲ့ကြရတယ်, ငါဘာကြောင့်လုပ်ခဲ့တာလဲ
ဒါပေမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစပြီးပြန်လည်ကြည့်ရှုလာသည်။ တဖန်သင်တို့ဖြစ်ပျက်ကိုသိ? ED ကပြန်လာတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုအဲဒီတုန်းကလိုမျိုးအထင်မသေးခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်လောက်လေးနက်တယ်ဆိုတာသတိရစေတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်တိကျစွာ (အဘယ်သူမျှမ pun ရည်ရွယ်) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အတူဒွန်တွဲဒီပြproblemနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးရည်းစားဖြစ်ကတည်းကလေးနက်သောအရာမရှိပါ။ ထိုအကောင်းစွာငါတကယ်ကလက်လွတ်။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်မဟုတ်ဘဲတကယ့်အရာတစ်ခုခုရှိတာကိုကျွန်မတကယ်သတိရတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်နဲ့စကားပြောနိူင်တဲ့တစ်ယောက်ယောက်နဲ့စကားပြောနိုင်ပါတယ်။
နှစ်သစ်ကူး, ED, DE နှင့် Nofap
အစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းငါနောက်ဆုံးအပတ်က nofap လှည်း၏ကျဆင်းခဲ့သည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်ဖြစ်ခြင်းအဘို့အကြှနျုပျ၏အဓိကအကြောင်းပြချက် porn-သွေးဆောင် ED ဖြစ်ပါတယ်။ ငါအခမဲ့ porn ရှိနေဆဲ, နှင့် ED တက်ရှင်းလင်းရေးခံရဖို့ပုံရသည်။
ငါနှစ်သစ်ကူးဘို့ငါ့ရည်းစားကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ မနေ့ညနဲ့ဒီမနက်မှာပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံကြတယ်။ နှစ်သစ်ကူး၏ဆုံးဖြတ်ချက် - fap လျော့နည်းခြင်း၊ ညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။
ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာယနေ့ဟွတ်ကိုမြင်တော်မူ၏။ အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့ ED ခဲ့ကြတယ်! ဒါဟာ foreplay စဉ်အတွင်းခက်ခဲသာ 10-20% ခဲ့ပေမယ့်ဆွလောက် 10 စက္ကန့်နှင့်ကအကြောင်း 80% အထိဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ PIV (ငါကွန်ဒုံးကိုအပြစ်တင်) မှဖြစ်သင့်ထင်သလောက်ခံစားမိဘူးဒါပေမယ့်အဲဒါကကြီးနေတုန်းပဲ။ ငါထိပ်ဆုံးကမိန်းကလေးကနေ O ပဲရတယ်၊ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာတယ်
ငါ့ကိုစိတ်ထိခိုက်စေသည့်အရာတစ်ခုမှာ၎င်းကိုစီစဉ်နေစဉ်ကျွန်ုပ်သည်ကြောက်စရာကောင်းသောစိုးရိမ်ဖွယ်ရာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခေါင်းအုံး / မူးဝြေခင်း၊ တံသင်နှင့်အပ်များ၊ နီးပါးမော ကျွန်တော့်ကိုတံခါးမှထုတ်ယူရန် 600mg phenibut ကိုယူခဲ့သည်။ ၎င်းကိုခွဲထုတ်ရန်လိုသည်။ လုံးဝအဓိပ်ပါယျမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ (ငါ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်စိတ်မပူခဲ့ပါ၊ သို့ဖြစ်ရာကဲ့သို့သော) ထိတွေ့မှုကဂရုစိုက်သင့်သည်။ ငါထင်တာကတော့အပြစ်ရှိတယ်၊ ခဲယဉ်းတဲ့အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ပုန်းအောင်းခြင်းစသည်တို့ဟာငါတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကတိုက်ပွဲ ၀ င်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လေယာဉ်ပျံကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ MO မှာသတိမရှိတဲ့စိတ်မရှိတာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပဲတွေ့ရတတ်တယ်။
ဟေးမင်းကငါသုံးရက်ပတ်လုံး PMO၊ MO မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာအားလုံးကိုပြောပြချင်တယ်။ အားလုံးကိုပြtellနာမရှိဘူး။ ငါလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည့်အထိကျွန်ုပ်၏နှစ်ဆယ်ကျော်အများစုသည်အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ED ၏ဒဏ်ကိုခံခဲ့ရသည်။ အဘယ်အရာကိုဖြုန်းဆယ်စုနှစ်။ ငါနုတ်ထွက်ကတည်းကငါအများကြီးပိုပြီးစိတ်ကူးယဉ်နှင့်ခက်ခဲလာပြီစတင်သတိပြုမိသည်။ ယောက်ျားတွေကစိတ်ကူးယဉ်မကောင်းဘူးလို့ပြောကြပေမယ့်ကောင်းတဲ့အရာကတော့ငါသိတဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့တကယ့်ပုံမှန်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုအကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်နေတာပါ။
ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ဟာညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့အချိန်ကတည်းကစိတ်ကူးယဉ်လို့မရခဲ့ဘူး။ စာသားအတိုင်း, ငါ porn မပါဘဲ MO ကိုကြိုးစားလိမ့်မယ်ငါ့ ဦး နှောက်ကဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမေ့သွားတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ နံနက်သစ်သည်ထိမှန်ပြီးလွဲချော်နေပြီးလုံးဝစိုစွတ်သောအိပ်မက်များမရှိချေ။ ဒီမှာရက်ပေါင်းသုံးဆယ်ရှိတယ်။ ဒီတော့ပွင့်လင်းရိုးသားဖြစ်ခြင်းအတွက်လူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါဟာငါ့ကိုခွန်အားနှင့်မျှော်လင့်ချက်ပေးသည်! -G
အဆိုပါနှိုးဆော်သံခြောက်လမှာအသံ။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကူးလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်နှိုးဆော်သံရပ်တန့်ထတယ်။ နောက်ကျောအိပ်ရာမှလမ်းလျှောက်ထိုင်နဲ့ကျွန်မနိုးထဖို့ကြိုးစားသကဲ့သို့ငါ၏စောင်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုတ်သင်။
ငါငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ငါ့လက်ဝှေ့သမားတွေတဲဆောက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ ဒီအရေးအသားကဒီအောင်ခြင်းကကျွန်တော့်ကိုအောင်မြင်စေတဲ့သဘောကနေမျက်လုံးတွေကိုမှေးမှိန်စေသည်။ ငါစာသားငါ့တိုက်ခန်းကိုနောက်ဆုံးမှာအခြေချမတိုင်မီမိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အလမ်းလျှောက်ခဲ့ရသည်, ဒါပေမယ့်ငါတစ်နည်းနည်းစိတ်ထဲခဲ့ပါ, တကယ်တော့ငါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုကဲ့သို့သောနံနက်ခင်းသစ်သားကြီးကြီးကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်သိမ်းဆည်း။ မရနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှင့်နှစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်လောက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သော (၁၂) နာရီကတည်းကတစ်နေ့လုံးခြုံငုံ။ ကောင်းသည်။
ငါမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုသနားခြင်းနှင့်အထီးကျန်ခံစားမှုတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောအလွန်လေးလံသောနိမ့်ကျသောရက်များနှင့်အတူခဏအနားယူနေစဉ်။ ယနေ့နံနက်ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဆင့်သစ်ကိုမှတ်သားဖော်ပြခဲ့ပြီး၎င်းသည် flatline ကိုရှင်းလင်းပြီးနိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ်မျှော်လင့်မထားသော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းလိမ့်မည်၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်၏လှုံ့ဆော်မှုအချို့ကိုအသစ်တဖန်ပြန်လည်ခံစားလာရသည်။ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး၊ ဘယ်လောက်ပဲရှုပ်နေပါစေသင်ရဲရင့်တဲ့ကောင်လေးတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့ dudettes တွေအတွက်ကျွန်မအားပေးမှုအချို့ပေးမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။
ငါလုပ်ခဲ့တာတွေကိုစွဲစွဲမြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားလို့အရမ်းဂုဏ်ယူတယ်။ အခုဆိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေပြတ်တောက်သွားပြီ။ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြောင့်ငါ၏စိတ်ပိုင်းဖြတ်ချက် ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်, ငါ့ဆင်းရဲဒုက္ခလျော့နည်းစေသည်။ အားတင်းထားသည်!
၅၂ ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာလုံးဝညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ရောဂါကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီး၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းလာပြီးကြွက်သားတွေပိုမိုတက်ကြွလာပြီးပြီးခဲ့သည့်ညကကဲ့သို့အပျိုစင်မဟုတ်တော့ပါ။
ငါမကြိတ်ခွဲ PIED နဲ့အရမ်း sexy မိန်းမနှင့်လိင်ခဲ့ကြတယ်!
ဤတွင်အောင်မြင်သော reboot ဖို့ပါပဲ
PIVO 63 ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း nofap
၆၃ ရက်အကြာမှာဇနီးသည်ကသူမအတတ်ပညာကိုအကောင်းဆုံးသုံးနိုင်ခဲ့ရင်တောင်မှငါမထနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံး www bootys တွင်အော်ဂဇင်ရသည့်ပြproblemsနာများလည်းရှိသည်။
ထိုအခါငါဂယ်ရီ Wilson ကရဲ့ website များ yourbrainonporn.com တွေ့ရှိခဲ့ကြောင့် "အိမ်ပြန်လာ" နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။
ချက်ချင်းငါ့အ nofap / nosex / noporn / noedge ခရီးစတင်ခဲ့သည်။
ဒီညငါ nofap / nosex / noporn / noedge ၏ 63 နေ့ရက်ကာလအဘို့ကောင်းသောဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ကိုယ့်ကိုကိုယ် PIVO တယ်ဘယ်အရာကိုစမ်းသပ်ချင်တယ်။ မကြာမြင့်စွာတည်တံ့ PIV သာစက္ကန့်အနည်းငယ်အော်ဂဇင်မီ, သို့သော်အလွန်အများကြီးပိုကောင်း ZERO ထို့နောက်ငါ 63 ရက်ပေါင်းငါအဘို့အမျှော်လင့်သောအရာကိုပြုတော်မူပြီထင်ပါတယ်။
ယခုငါနှင့်ငါ့ဇနီးအတွက်အကောင်းဆုံးလိင်လှိုင်းအလျားကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အရွယ်ရောက်ကလေးများနှင့်အတူလူလတ်ပိုင်းစုံတွဲဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကငါတို့နှင့်အတူအိမ်မှာမရှိတော့ဘူး။
ဇနီးနှင့်အတူလိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမ ED ။ ကြီးမားသောအောင်မြင်မှု။
ငါဒီနေ့ ၁၁ ရက်နေတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ညမှာငါနဲ့မိန်းမကလိင်ဆက်ဆံတယ်။ လိင်မှုကိစ္စကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြုခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၊ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့်စိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်အမျိုးသမီးအတွင်း၌အော်ဂဇင်ပြုခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြသခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးဝမ်းသာပီတိဖြစ်ခဲ့ရတယ်! ငါ fapping ဖြစ်လျှင်ဤဖြစ်ပျက်မဟုတ်ကြောင်းသေချာပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
52 ဘို့မယ်နောက်ဆုံး MO ကိုကတည်းက 90 ရက်။ နောက်ဆုံးညဥ့်အစဉ်အဆက်ပထမဦးဆုံးအစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုမြင်မက် !! 🙂
အိုကေတော့လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂၂ ရက်ကကျွန်မရဲ့ PMO စွန့်စားမှုကိုမစတင်ခဲ့ပါဘူး။ ကြောင်းသက်တမ်းကျော်ငါနှစ်ကြိမ် MO'ed ပါပြီ။ နေ့ ၃၄၊ ၇၀ ရက်။ အခုဆိုရင် ၉၀ ကို MO မထားတော့ဘူး။
ငါ့မှာရည်းစားရှိတယ်၊ ငါတို့ ၆ လအထိလာမယ်။ ငါရက်ပေါင်း6အကြာတွင်လိင်အောင်မြင်စွာနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နောက်မှအဓိကကျဆင်းမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ဦး နှောက်မှေးမှိန်နေတုန်းပဲ။ ကျွန်မရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာပျားရည်ဆမ်းခရီးအချိန်ကုန်သွားပြီ၊ ၂၁ နှစ်အရွယ်မှာသူရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးဆက်ဆံရေးမှာမြက်ပင်သည်စိမ်းလန်းစိုပြေသော syndrome ရောဂါသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ postital coital "ဆင်း" ခံစားချက်ဤအတှေးအပို။ အလွယ်တကူသူတို့ကိုယ်သူတို့ထင်ရှားပြဆိုလိုသည်။ ဒါပေမယ့်ငါကအားလုံးနှင့်အတူအသုံးအနှုန်းများမှစတင်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်မင်းရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးဆက်ဆံရေးမှာ၊ ငါအခုဒီဟာကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့မခံစားတော့ဘဲဒီခံစားချက်တွေကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့ငါ့ရဲ့အထူးတခြားအားနည်းချက်တွေကိုရှာဖွေနေတာရပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်။ ရလဒ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ပျော်ရွှင်မိသည်။ ငါဟာဘယ်သူနဲ့မှမတူချင်ဘူး၊ တစ်ခုတည်းသောသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ငယ်ငယ်လေးဖြစ်ချင်တဲ့သွေးဆောင်မှုပဲ။ ကျွန်တော့်မိန်းကလေးကိုဘယ်တော့မှလိမ်ညာမှာမဟုတ်ဘူး။ လိင်သည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်နေပြီး၊ ဤမျှများပြားသောလိင်ဆက်ဆံမှုသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အသစ်အဆန်းတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားလေ့ရှိသည်။
ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့သောသုံးရက်ကကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှု (TRIGGERS) သည်ညအချိန်တွင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးနံနက်အချိန်၌ပင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ဒါကတကယ့်အောင်မြင်မှုပါ၊ ငါ reboot မတိုင်ခင်မကောင်းတဲ့ PIED ခံစားမှုကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံလို့မရဘူး။ မင်းကမင်းလိုမင်းလိုမင်းရဲ့စိတ်ထက်သန်မှုတွေကိုငါလျှော့ချလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အကယ်လို့မင်းက reboot ကိုစွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်ပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုအထိလိင်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုရှောင်ကြဉ်လျှင်စွမ်းဆောင်ရည်ပြန်လည်ရရှိလိမ့်မည်။ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်တစ်နေ့ငါအဆင်ပြေသွားသည်၊ သို့သော်များသောအားဖြင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနှစ်ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်အချရဆုံးဖြစ်သည့်အချိန်တွင်၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားအပေါ်တွင် (သူမကကျွန်ုပ်နှင့်မထိုက်တန်ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောခြင်း) ဖြစ်သည်။
နှစ်တွေကြာတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့မီးခိုးမြူတွေပျောက်ကွယ်သွားတာနဲ့အမျှဒီစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကနေငါထွက်ခွာသွားဖို့ဆိုတာပိုပြီးလွယ်ကူသွားတယ်။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်ညတွင်အိပ်ပျော်နေသောအချိန်တွင်ရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်သည်နိုးလာသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အိပ်မက်မက်နေသည် (နားလည်နိုင်သော TRIGGERS) နှင့်ကျွန်ုပ်ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံနေပြီးကျွန်ုပ်မကြိုးစားသေးသောအခြားအရာများကိုလုပ်နေသည်ဟုခံစားမိသည်။ ရုတ်တရက်ငါသုတ်ရည်ထွက်လာတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ ငါနိုးလာပြီးငါ့ရဲ့ရည်းစားကငါအနားမှာအိပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ ဤသည်ငါ့အဘို့ huuuuuuge ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၃ နှစ်အရွယ်များထံမှနေ့စဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရူံးကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြင့်အပျိုဖော်ဝင်စဉ်ကစိုစွတ်သောအိပ်မက်ဆိုးဝါးဝါးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဖူးပါ။ အပြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အသစ်အဆန်းတွင်ဖမ်းမိခြင်းခံရပြီးတစ်ခါတစ်ရံတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်သည်။
သင်လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၉၀ ကိုကြည့်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုမကြည့်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်ထိုထက်ကောင်းလာမည်မဟုတ်ဟုစဉ်းစားရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ငါထင်တာကတော့ငါဟာစိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေမက်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးမဟုတ်ဘူးလို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်မှားကြောင်းသက်သေပြရုံမကကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်များစွာကျန်ရှိနေသေးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ပါတယ်။ ၃၈ ရက်အထိရက် ၉၀ အထိ MO မရှိ၊ ၆၈ ရက် ၁၈၀ ရက်အထိ PMO မပါ ၀ င်ပါ။
သွားယောက်ျားတွေ Keep !!!! ဤရွေ့ကားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြိမ်ဖြစ်ကြ၏။
tl; dr: ရက် ၃၀ ခန့်အကြာတွင် PMO မပါသည့်နောက်တဖန်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ပိုင်း၌စိတ်မသက်မသာဖြစ်သော်လည်း၊ မနေ့က wet စိုစွတ်သောအိပ်မက်မက်ခဲ့သည် had
နောက်ခံအနည်းငယ် - ဒီကွန်ရက်ရှိလူအများစုနှင့်ဆင်တူသောငါသည်ငယ်ရွယ်သောအရွယ်မှ porn ကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီး၊ တကယ့်မိန်းကလေးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းထက် ပိုမို၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ED နှင့် / သို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်နှင့်ပြproblemsနာများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေသူဟုထင်ပြီးလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကကျွန်ုပ်သည် ED သို့မဟုတ်လွဲချော်ရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးတချို့ကဒီပြproblemနာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကျွန်မရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ချစေတယ်။ တစ်ချိန်ကငါ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကဒါကအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လို့ယူဆပြီးအဲဒါကို Flatline စင်မြင့်ထဲကိုရောက်သွားပြီး“ မရပါဘူး။
နှစ်ပေါင်းများစွာမြန်မြန်ရှေ့သို့ အလွန်ရူးသွပ်သောဆက်ဆံရေးရှိပြီးနောက်ငါနှစ် ဦး စလုံးအကြီးအကျယ်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်တော်တော်လေးမြင့်မားသော opiates စွဲခဲ့သည်။ ငါစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ် opiates ရုံနှင့်အတူ P, M, သို့မဟုတ်အိုတစ်စုံတစ်ရာစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့မယ်လို့သံသယ - ဒါပေမယ့်နှစ် ဦး စလုံး? အခွင့်အလမ်းမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ (တမင်တကာမဟုတ်) လပေါင်းများစွာ PMO စွန့်လွှတ် - ဘယ်လောက်အမှန်တကယ်အတိအကျပြောဖို့ခဲယဉ်း။ ကျွန်မစိတ်ဓာတ်ကျလာတာနဲ့အမျှမိသားစုဆီကနေအကူအညီတောင်းခဲ့တယ်။ ငါခဏတာပြောင်းရွှေ့လာတယ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တယ်၊
ဆုတ်ခွာပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ပုံမှန်ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှထူးဆန်းသည့်အရာမှာကျွန်ုပ်သည်အိပ်မက်များမက်ပြီးမကြာခဏဖြစ်သည်။ ညနက်သန်းခေါင်ယံမှာထလွန်းအားကြီးသောစိုက်ထူမှုနှင့်ကျွန်တော်အိပ်ရာပြန်ဝင်ရန် MO ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာနိုးထခဲ့ရသည်၊ ကျွန်ုပ်မှတ်မိသလောက်ကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်မဖြစ်ခဲ့ဖူးပါ။ ကျွန်မရဲ့လိင်စိတ်ကပြန်လာပြီဆိုတာကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ jpegs လို့ခေါ်တဲ့ R type porn ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်နောက်ထပ်ပထမ ဦး ဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခု - ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ရုံဖြင့်ထိစရာမရှိဘဲအလွန်ရုတ်တရက်ပြင်းထန်သောစိုက်ထူခြင်းဖြစ်သည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, ပြီးနောက်, ငါ ED ပြန်လာမှီတိုင်အောင်ငါ4လကြာတဲ့ညစ်ညမ်းတင်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည်ယခုကျွန်ုပ်၏ရည်းစားဖြစ်သူနှင့်တွေ့ဆုံရန်လည်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အိပ်ခန်းထဲတွင်ပြproblemsနာများစွာရှိခဲ့သည်။ ဒီ site ကိုရှာပြီးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိပြီးနောက်ငါ PMO လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုစွဲကိုင်ပြီးခက်ခဲအောင်ကြိုးစားမယ်။ ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုငါယုံကြည်တယ်။
ဒါကြောင့် P သည်မည်မျှထိခိုက်ကြောင်းမေးခွန်းထုတ်သူမည်သူမဆိုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်နှင့်အလားတူအခြေအနေမျိုးရှိသူမည်သူမဆိုအတွက် - ပိုကောင်းလိမ့်မည်။
ငါဘယ်တော့မှ porn ကိုစွဲလမ်းဘူးသည်နှင့်အတူစတင်ချင်တယ်။ လွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်ခန့်ကကူးစက်တတ်သောရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ ED ကိုကူးစက်ပြီးနောက်မှသာ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပုံမှန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အစအ ဦး ၌ porn သည်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူလုနီးပါးအားလုံလောက်သောစိုက်ထူခြင်းသို့ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ အချိန်အတန်ကြာတဲ့အခါဘယ်တော့မှမသေချာဘူး၊ ငါ့စိုက်ထူမှုတွေလည်းအားနည်းလာတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒကိုစတင်တွေ့ရှိချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည် Viagra ကိုညွှန်းခဲ့သည်၊ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည် Cialis တွင်နေ့စဉ်ရှိနေသည်။
နေ့စဉ် Cialis မပါဘဲ ၁၀ ရက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်သည် GF နှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ဤသည်သုံးရက်အတားအဆီးပြီးနောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူခြင်းသည် ED ဆေးများကိုအသုံးပြုသော ၁၀ ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထိပ်ဆုံးနံပါတ် ၈ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ မှတ်တမ်းအတွက်ကျွန်ုပ်သည် GF နှင့်စက်တင်ဘာလမှစပြီးပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့သည်။
ငါမကိစ္စသင့်ရဲ့ ED စေသောအရာကို porn ကပိုဆိုးစေမည်သင်ယူကြသည်။
ဒါကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးငါနောက်ခံအချို့ပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ ED သည်အချို့သောနေရာများကဲ့သို့မကောင်းသော်လည်းမတည်ရှိပါ။ ငါဖြစ်ကောင်းတစ်နေ့လျှင် 13.. မကြာခဏကြိမ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ကတည်းကမြန်နှုန်းမြင့် porn ကိုကြည့်။ , ငါအသက် ၁၆ နှစ်ကတည်းကလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါမိန်းမတွေနဲ့အတူအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီနှစ် (နှင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ် [ယခုအသက် ၂၃ နှစ်ရှိပြီ)] ငါနင့်ကိုမထနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်။
ငါဟာဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာရှိနေတယ် (ကမ္ဘာ့အဝေးတစ်နေရာကလိုဝေးလံခေါင်သီတဲ့နေရာတွေမှာ) ။ ဒီနောက်ဆုံးခရစ်စမတ်အားလပ်ရက်ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးသတိပြုမိတယ်။ ဘယ်နေရာမှာမှငါမရနိုင်ခဲ့ဘူး၊ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ ဒီနွေရာသီမှာငါတကယ်ထိမိခဲ့တယ်၊ ငါလိင်ဆက်ဆံဖို့အတွက်ငါအနိုင်နိုင်ရနိုင်သည့်နောက်ဆုံးသောနေ့တိုင်အောင်နှစ်ပတ်လုံးလုံးအကြိမ်ကြိမ်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ porn / masturbation အကြောင်းဖတ်ပြီးတဲ့အရာအချို့ကိုငါပြန်အမှတ်ရမိတယ်၊ ဘာကြောင့်ဒီလိုပျက်ကွက်ရတာလဲဆိုတာကိုနောက်ဆုံးမှာမင်းရဲ့ ဦး နှောက်အပေါ်သို့ထိ မိ၍ လဲမိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ no porn / fap ကိုစတင်ခဲ့ပြီး ၂ ပတ်ကြာအောင်ပြန်ပေါ်လာတယ်။ ငါ့လက်မှတ်ကငါ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုရောက်နေတယ် ယခု“ ကုသမှု” အတွက်…
နေ့ (၃၀) တွင် (အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းထပ်မံထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းဖြင့်ပိုမိုအားဖြင့်) ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်အတူရှိနေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ငါတို့ကြိုးစားတိုင်းငါပြproblemsနာမရှိဘဲနဲ့စိုက်ထူခဲ့တယ်။ ဒီတော့ခင်ဗျားကကျွန်တော့်ကိုကုသပြီလို့ထင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအပတ်ပြီးရင်ငါသူနဲ့အတူရှိခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကသူနဲ့အတူနေခဲ့ရတယ်။ ED မပျောက်သေးဘဲငါတက်နိုင်ပြီ။ နောက်ထပ်ပြproblemနာတစ်ခုရှိတယ်။ (တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရုံစက္ကန့်၌ရှိသကဲ့သို့) ။
သူမတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်မ ၀ င်စားသကဲ့သို့ငါယခုစိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ဘာမျှမလုပ်နိူင်တော့ဘဲတစ်မိနစ်မျှကြာသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမအခုအဝေးကိုရောက်နေပြီ။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးငါမှာ MO (၂) ကြိမ် (ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတဲ့အတွေးတွေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်) ရှိခဲ့ပြီးအရေးအကြီးဆုံးကတော့ဒုတိယအကြိမ် (ဒီနေ့) ငါတောင်မှဘာမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး၊ ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ အိုစက္ကန့် ၂၀ လောက်မှာကျွန်တော့်လက်ထဲကအတွေးတွေမရှိဘဲနဲ့။
တခြားဘယ်သူ့ကိုမှဒီမှတဆင့်သွားပြီလား ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ အဆုံးမှာတော့ ED နီးပါးအတူတူပဲ၊ ED ကုန်သွားပြီ။ အခုငါလုံးဝကြာကြာမနေနိုင်တော့ဘူး။ နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့အတူတူပဲ။ ငါ့ရဲ့ gf (ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ကတခြားမိန်းကလေးတွေကိုခွဲလိုက်မယ်လို့ယူဆရင်) ကငါ့လိင်ကိုဆက်ပြီးဆက်ဆံနေ ဦး မှာပဲ စွမ်းဆောင်ရည်ကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ခြင်း။ ထိုရက် ၃၀ တွင်တစ်ပတ်မျှသာကျွန်ုပ်သည်“ ပုံမှန်” ဖြစ်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ update ကိုပါပဲ
ငါ၏အ 100th နေ့အဘို့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လိင် !!!
100 နေ့ရက်ကာလအဘို့အဘယ်သူမျှမ pm တွင်ပြီးနောက်နှင့်မျှမ orgasm (ငါ၏အဟောင်း gf နှင့်အတူလိင်) 76 နေ့ရက်ကာလအဘို့, ကိုယ့်နောက်ဆုံးညဥ့်အောင်မြင်သောလိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
blowjob မလိုအပ်ခြင်း၊ manual stimulation မလိုအပ်ခြင်း၊ Hard Rock စိုက်ထူခြင်း (၁၀၀% နီးပါးခန့်တွင်သူမသည်ကျွန်ုပ်အားသူမအတွက်အလွန်ခက်ခဲသည်ဟုခံစားခဲ့ရကြောင်း၊ စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပေါ်စက်များထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော) နှင့်သူမအတွက်လှပသောအော်ဂဇင်တစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ 😀
သူမရဲ့ pussy ကို ၄ မိနစ် ၅ မိနစ်လောက်နေစုန်းတောင်လိင်ဆက်ဆံနေတယ်။
ကျွန်တော့်ယခင်အောက်တိုဘာလတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောကျွန်ုပ်၏ GF သည်သူမကိုသူမ၏အိမ်သို့လာရန်ဖိတ်သည်။ ငါလိင်စီစဉ်ထားကြပြီမဟုတ်။ ဒါပေမယ့်သူမကိုနမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မတို့ဟာပိုပြီးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာကြပြီး၊ ကျွန်မရဲ့လိင်ကိစ္စကိုအရမ်းခက်ခဲသလိုခံစားခဲ့ရတယ်။ သူမသည်သူမ၏ထိုးဖောက်ဖို့ငါ့ကိုမေးတယ်။ ငါယုံကြည်မှုဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်ငါပြု၏။
ဒါပေမယ့်ငါ့အတွက်အော်ဂဇင်မရောက်မချင်းငါမသွားခဲ့ပါဘူး ကိုယ့် reboot ကိုမထိခိုက်စေလို့ပဲ ငါသူမကို ၁၀ မိနစ်ကနေ ၁၅ မိနစ်လောက်ထိုးဖောက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါက orgasm ကိုမဟုတ်ဘဲသုတ်ရည်လွှတ်ပေးတယ်။ ငါ့ ဦး နှောက်ကို dopamine အလျင်အမြန်ကာကွယ်ပေးသည်။
လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအစီရင်ခံစာ - အလုံးစုံအောင်မြင်မှု !! သတင်းကောင်း။
Update ကို: မင်္ဂလာဆောင်ညဉ့်တွင်လိင်ခဲ့။ အားလုံးကောင်းစွာသွားလေ၏!
ငါ 3mg cialis ၏ 4/10 သာယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ငါအချိန်တစ်ခုလုံးကိုခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ငါ DE ရှိခဲ့ပေမယ့်သူကိုဂရုစိုကျတယျ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါဟာအမြဲတမ်းခက်ခဲနေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူမကြိုက်မှာပါ။
ငါအတိတ် 35 ရက်များအတွက်လုံးဝ PMO မရှိဘူး။ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာကွန်ပျူတာကိုခဲယဉ်းနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်မှာကျွန်ုပ်လက်လှမ်းမီခွင့်မရအောင်သေချာအောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ libido ပြန်လာနေတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကကျွန်မကို flatline ကနေထုတ်ပစ်လိုက်တယ်ထင်တယ်။ အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး လှောင်ပြောင်ခြင်း၏ပေါင်းစပ်မှုကကျွန်ုပ်သည်ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်အားအလွန်ချိုလွန်းသည်။
ငါလာမယ့်လအတွက် 5mg cialis ယူ။ လာမည့်လသို့မဟုတ်ဒီတော့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသက်သာစေလိမ့်မယ်။
ဒီဖိုရမ်နှင့် commented သူတွေကိုထံမှအပေါငျးတို့သထောက်ခံမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့အားကံကောင်းပါစေ။
1 ။ အားလုံးမှာ NO PMO ။ (သာကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်အတူမီတာ)
3 ။ အလင်းကို excercise ။
4 ။ Gingseng နှင့် ginko biloa ။ (ကျနော်ယာယီသည်အခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဤယူပြီးရပ်တန့်ပေမယ့်သူတို့ကအကြီးစုစုပေါင်းစွမ်းအင် Boosters ပါပြီ)
5 ။ ဒါကနှင့်ငါ့ဇနီးနှင့်အတူပရောပ။
6 ။ cialis ၏အသေးစားဆေးညွှန်း။
မိမိကိုယ်ကိုအင်တာနက်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤတွင်အများကြီးပို့စ်တင်မည်မဟုတ်ပါ နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အကြီးဆုံးသောအရာကပထမညဥ့်ပြီးနောက်၌ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ခဲ့သောကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြင့်ယိမ်းယိုင်နေသည်။ ဒါဟာလိင်မှုကိစ္စမဟုတ်ပေမယ့်ကျွန်မဟာခက်ခဲတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဒီကနေဆင်းသက်လာတဲ့အပျိုစင်ဘဝနဲ့သူမအားလုံးကိုရှာမတွေ့ဘူး။
; D စီမံကိန်းပြန်လည်စတင်တဲ့ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အကြာမှာကောင်မလေးဟောင်းတစ်ယောက်ကရေချိုးခန်းထဲကိုသွားပြီးအိပ်ရာထဲပြန်ဝင်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အိပ်မက်ထဲကနိုးလာတယ်။ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာတင်ငါ Pam နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကလိင်ကောင်တာအကြောင်းကိုစဉ်းစားခဲ့တယ်။ နောက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်မှာအလွန်မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်သည်။ ငါအပြည့်အဝနံပါတ် 10 ခဲယဉ်းဘာတယ်ဆိုတာကိုအစဉ်အဆက်ဘာအဘယ်သူမျှမနှိုးဆွနှင့်အတူတယ် !!! ယခုကျွန်ုပ်သည်အသက် ၅၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းကို ၂၅ နှစ်ကျော်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ Viagra နဲ့ Stimulation ကိုတောင်မှခက်ခက်ခဲခဲနေခဲ့ရတယ်။ ဤအရာသည်လာမည့်အရာများ၏လက္ခဏာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် PIED သည်ပြaနာမဟုတ်တော့ပါ၊ ကျွန်ုပ် ၅ မိနစ်အိပ်ရာထဲတွင်အိပ်လျှင်ကံကောင်းပါစေ
ဒါကြောင့်ငါ pmo အလွန်ရှားပါးတော့ဘူးရှိရာအမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအလွန်များစွာသောအရာများကိုများစွာကူညီနိုင်ခဲ့သည်။ ငါလိင်ဆက်ဆံတာကိုတစ်ပတ်နှစ်ခါလောက်လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါသိထားတာများလေလေ၊ ငါဒီတစ်နာရီကျော်သွားမယ်၊ ပြီးအောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမယ့်ငါထက်ငါပိုကြာရှည်ခံချင်တယ်။
ကျွန်တော့်မိန်းကလေးမှာအမြဲတမ်းအော်ဂဇင်များစွာရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကအရမ်းနှိမ်ထားဖို့ကြိုးစားနေတာ၊ သူမမှာတစ် ဦး တည်းရှိလာတယ်၊ ပြီးတော့သူကညှစ်ထုတ်လိုက်တယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပေါ်လာတယ်လို့ခံစားမိတယ်၊ ဆွဲထုတ်တယ် ငါသူမတကယ်သဘောကျတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးနွေးထွေးနေတယ်။ ဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ငါဘယ်လိုပိုကြာရှည်ခံနိုင်မလဲ၊ ငါလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှုတ်ထုတ်ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ အထက်တန်းကျောင်းကတည်းကဒီပြissueနာမရှိခဲ့ဘူး၊ ပြီးတော့လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်အကြိမ်ကြိမ်ပျောက်သွားခဲ့တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ပတ်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပြီးသူဟာလွန်ခဲ့တဲ့ ၉ ရက်ကသူနဲ့ကျွန်တော်အရမ်းစိတ်ရှည်ခဲ့တယ်။ ယနေ့ညသည်နောက်တစ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ၉ ရက်တာတည်ဆောက်မှုသည်တကယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့သည်။ အစပိုင်းမှာတော့ပြtroubleနာအနည်းငယ်ရှိခဲ့ပေမယ့်တစ်နာရီအကြာမှာတော့နောက်တစ်ခါလိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီးနောက်နံနက် ၂၃၀ နာရီမှာပြန်လည်အိပ်စက်ခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ဟောင်းနွမ်းသောချိုမြည်းကိုမိမိကိုယ်ကိုမှဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ Nofap ဟာနတ်သမီးပုံပြင်တစ်ခုပါ၊
အကြောင်းသုံးပတ်အကြာကျွန်မဇနီးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနဲ့ကျွန်မသူမကိုအရာရာထဲသို့ဝင်သောအခါအချောပုံပေါ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ရုတ်တရက်သူအပေါင်းတို့ငါအားလျော့သွား၏။ ငါ 18 နှစ်ပေါင်း porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူရုန်းကန်နေခဲ့ကြပြီ။ ငါလိင်ရှိသည်မယ်လို့သောအခါ, ပုံတွေကိုလုပ်ရပ် thru ငါ့ကိုရလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျး, ငါမရှိသလောက်သူမ၏နှင့်အတူဖြန့်ချိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အစဉ်မပြတ်ငါနောက်မှရေချိုးခန်းသွားနှင့် Kobe မြို့ Tai သို့မဟုတ်အချို့ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားယင်းစုပ်မှာချွတ် Jack လိမ့်မယ်။
ထိုနေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးမတည်မငြိမ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုစာသားကြောက်ပြီးကျွန်ုပ်စတင်ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ဟေ့၊ ငါအသက် ၃၀ ကျော်မှာရှိသေးတယ်၊ ဒါဖြစ်ပျက်နေပြီ။ ဒုတိယအကြိမ်ကျတော့ငါဆေးရုံကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သွားတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မဟာညစ်ညမ်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနဲ့လိင်တူချင်းလက်ထပ်ခြင်း၊ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုမကြည့်တော့။ ငါ Orange County မှာနေထိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့်ကမ်းခြေကိုသွားတဲ့အခါငါမိန်းကလေးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မြည်းတွေကိုကမ်းခြေပေါ်မှာအမြဲတွေ့နေရတယ်။ ငါလှည့်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကိုငါ့ခေါင်းထဲမှာမဖန်တီးနိုင်အောင်ငါကြိုးစားတယ်။ ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ထားသလိုငါလည်းမိန်းမကိုချစ်တယ်။
အခု ၃ ပတ်ရှိနေပြီ၊ အဲဒီအချိန်ကစပြီးငါအားကစားခန်းမထဲတက်ခဲ့တယ်၊ ဒါကကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော့်ဇနီးရှေ့မှာအဝတ်အချည်းစည်းလုပ်တာကိုပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိစေတယ်၊ ​​ဒါကပုံမှန်ဖြစ်သင့်တယ်။ မာရ်နတ်သည်ဤဒေသများ၌ငါ့ကိုလုယက်။
ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကငါတို့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါနောက်ဆုံးပျက်ကွက်ပြီးနှစ်ပတ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပဲ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာဇနီးသည်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ငှက်ပျောတွေသွားနေတယ်။ ငါသူမ၏အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကိုမြည်းစမ်းချင်ခဲ့သည်။ ငါတကယ်ခက်ခဲတဲ့စိုက်ထူမှုရရှိခဲ့ပြီးသူမထဲဝင်ပြီးထိုအချိန်တွင်သူမအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့တယ်။ သူမရဲ့လိင်တံထဲကို ၀ င်နေတာကိုသူမခံစားနေရတာကကျွန်တော့်အတွက်အလှည့်ပဲ။ ငါသူမ၏နူးညံ့ညင်သာဆုပ်ကိုင် (နမ်း, nibbling နှင့်သူမ၏လှပသော tanned ကိုယ်ခန္ဓာကံကောင်းပါစေ) ပင်သူမ၏ cunnilingus သူမကငါ့အပါးစပ်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ပြင်းထန်စွာညည်းတွားခြင်းနှင့် orgas ခဲ့သည်အထိတိုင်အောင်ပေးခဲ့သည်။ သူမကအော်စကာပြောတာနဲ့ငါသူ့ကိုလှည့်ပြီးသူမ၏ထဲသို့ထိုးထည့်နောက်ကွယ်မှမှဝင်။ ငါအလွန်ကြီးမားဝန်ထုတ်ပေးခဲ့သည်။
ငါနောက်ကျောကိုငါ့စိုက်ထူရှိသည်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကယ့်ကိုခက်ခဲငါ၏အစိုက်ထူစေသည်မဟုတ်။ အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုယခုတွင်ငါသည်ငါ့ဇနီးနှင့်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤအချိန် intercourse စဉ်အတွင်းတစ်စိတ်ခံစားမှုဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်။ ငါ့မျက်စိတစ်ဦးညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းတစ်ခု၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ပိတ်လိုက်ပေမယ့်ငါယခုအချိန်တွင်သူမ၏အာရုံစိုက်နှင့်ငါ၏မယားအပျြောအပါးပေးကမ်းကြသည်မဟုတ်။
ငါသူမသည်အပြောင်းအလဲကိုသတိထားမိသည်၊ သူမလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကဟန့်တားမှုနည်းသောကြောင့်သူမအားကျွန်ုပ်အားဘာမှမလုပ်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်သည်။ ဘာမှမ ဒါကြောင့်ယခုငါပြန်ရောက်ပြီ, လိင်ငါနှင့်ငါ့ဇနီး၏အပျော်အပါးများအတွက်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်။
ငါ့အဖက်နဲ့အတူ NoFap နှင့်အဘယ်သူမျှမ PMO..Had လိင်သို့နီးပါး2လအတွင်း 80% erection..PIED နီးပါးသွားပြီ yesterday..amazing..had ။ condom..NOFAP အပေါ်ချပြီးစဉ်နှင့်အစိုက်ထူဆုံးရှုံးမေ့သွားရောတဲ့ဘဝချွေတာပါ!
pied..l ကနေ ၁၀၀% ထပ်နေပေမယ့်အဲ့တာကိုရမယ်။ \_ t၁၄ နှစ်ကတည်းက fapping ဖြစ်ခဲ့ပြီး pied ကိုခံစားခဲ့ရတယ် .. nofap နဲ့မင်းကိုငါပြောသင့်တယ် .. ငါဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့သတင်းအားလုံးနုတ်ထွက်ကြ နောက်တစ်ခါ ..sex ကအရမ်းကိုကောင်းတယ် .. ဒီဟာကလိင်လို့ထင်ထားတာဘာလဲ .. .. nofap ကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး .. မင်းဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ်ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ ..